UJEEDADA QORAALKA OO KOOBAN
Yüklə 279,01 Kb.
ölçüsü 279,01 Kb.
1. 1: MADAXNIMADA DUMARKA
Waxa ugu weyn ee igu kallifay qoritaanka buuggaan iyo guud ahaanba kuwa kale ee bar bar socda waa:
In laga qaado Shareecada Islaamka ceebaysiga lagu ceebaystay wax aysan faraynin. Sidaas darteed la ilaaliyo sharafka Islaamka isla markaasna la dhawro xuquuqda aadanaha mar hadduu qasadka shariicadubva sidaas ahaa.
In la diyaariyo xukunno Islaami ah oo la qabsan kara xilliga maanta la joogo. Sidoo kale in laga dhigo Shariicada mid waafaqsan waqti kaste, qola kaste, meel kaste iyo guud ahaanba waxa jira iyo wixii jiri doona. Sidaasina waa si waafaqsan habsami u socodka shariicada Islaamka. Sababtuna waxay tahay in xukunada Islaamka ee kitaabka iyo sunnaha ku qorani ay yihiin qalab ceeriin (asal si guud u hadlaya) oo u baahan in aan warshadayno si aan u isticmaalno (aan dhab u fasirno si aan farac kaste oo yimaada ugu salayno iyaga asalka ah).
In laga faa’iidaysto cududa bisil ee ku jirta dumarka oo ah tirada ugu badan dadkeena maanta. Taas oo lagaga faa’iidaysanayo dhan walba; xag maskax, xag muruq iyo xag maaliyadba, iyada oo looga faa’iidaysanayo si waafaqsan awaamirta Eebbe inagu faray Islaamka. Taasina waa sida ugu horaysa ee lagu soo celin karo dalkii Soomaaliya ee burburay gaar ahaan, guud ahaana loo soo hinqin karo Muslimiinta maanta dunida ka habsaantay.
In la soo celiyo dumarkii qarnigan iyo kii ka horeeyey ku fasahaaday xornimadii dhalanteedka ahayd ee ku salaysnayd maadada iyo fisqiga. Taasina waxa ay si hal haleel ah u imaanaysaa marka iyagii la tuso oo lagu qanciyo xornimada sare ee uu Islaamku siiyey. Halkaasna ay ka qaataan xorninmo ka fiican midda ay ku lug go’een.
In lagu dhiiri geliyo culimada Islaamka in ay maskaxdooda ka shaqaysiiyaan oo ka guuraan macangagnimada aan meelna haysan. Taasi waa in ay ogaadaan in cilmigu ku yimaado doodo madax banaan oo aan la isku dirqinaynin rumaysadyo qof ahaaneed. Taasina waa in laga saaro diinta xaraysadka ama xajiska shakhsiyeed ama qoyseed (manapoly system) ee ku jiidaya in loo fahmo in dadku kala yahay dad diimeed iyo dad adduunyo. Ama haddan si kale u dhahno weedha; culimo iyo caamo.
MA LOO DOORAN KARAA DUMARKA IN AY WAX XUKUMAAN?
Waxa ay ila tahay in aanaan iminka ka doodayn in ay ragga iyo dumarku siman yihiin, waayo sinaana la’aanta lab iyo dhedig waxay ahayd mid ka mid ah jaahiliyaddii hore ee macno la’aanta loo wad wadi jiray, haddana ayba duruufuhu iska reebeeen. Ilaahay marka uu dadkiisa la hadlayo si uu wax u faro ma kala saaro rag iyo dumar balse waxa uu ugu wada jeediyaa si sinaan iyo isku midnimo ah. Intaa keliya ma ahane Alle waxa uu sheegayaa in aan isku mid ka nahay dhan kaste oo laga eegaba oo waatan uu Eebbe leeyhay: “Wuxuu ku ajiibay Eebahood anigu ma dayacayo camal (hawl, shaqo, waxtar sida cibaado iyo wanaag kale oo la sameeyo) mid camal falay oo idinka mid ah lab iyo dhedig kuu ahaadaba, qaarkiin qaar (kale) buu ka ahaaday"1
Nebiga (Nabadgalyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee – NNKHA), waxa uu yiri isaga oo hadalkiisa ku abaaray fasirka aayadatan: “Run ahaatii dumarku waa kuwo walaal (isku aabe iyo isku hooyo) ah la ah ragga (oo had iyo jeer garab taagan ragga”
Waxaad arkaysaa Eebbe oo faraya amar ama reebaya xumaan waxa uu leeyahay “ hooy dadow”, “hooy kuwa Eebbe rumeeyow” iwm. Sidaa ayaad arkaysaa in guud ahaanba waajibaadyada iyo xilalku ka wada dhexeeyaan rag iyo dumar. Eebbe waxa uu u xilsaaray guud ahaan inta wanaagsan rag ahaadaa iyo dumara ahaadaaba in ay ka shaqeeyaan sidii ay ku soo toosin lahaayeen inta habowsan. Waxa uu labada jinsiba faray in ay ka wada shaqeeyaan wanaag iyo samo, kuna cabiraan wax qabadkooda af, adin, maal, qalbi, iyo alaab intaba. Waatuu Eebbe leeyahay: " Mu'miniinta Rag iyo Haweenba qaarkood qaarka (kale) waa u sokeeye, waxayna faraan wanaagga kana reebaan xumaha, waxayna oogaan Salaadda . .."2. Isku dar ahaan labada jinsi waxa ah xil si isla eg dusha uga wada saaran in ay u halgamaan sidii ay diinta Islaamka iyo dadka Muslimiinta ah sare ugu qaadi lahaayeen. Nebiga (NNKHA) ayaa waxaa la sheegay in uu yiri: "Qofkii aan danaynin amuuraha Muslimiinta kama mid ahan".
Taasi waa marka ay dadku wanaagsan yihiin laakiin haday dad xun yihiin arinku waxa uu isu gedinayaa madax iyo majo oo waxa ay labada jinsi isku mid ku noqonayaan xumafarka, xuma falka iyo samareebka. Eebbe waxa uu leeyahay: “ Munaafiqiintu Rag iyo Dumar qaarkood qaarka kale ayuu ka ahaaday waxayna faraan xumaanta, waxayna reebaan wanaagga"3.
DR. Mustafa Subaaci oo ka mid ah culimada casrigaan ee caanka ah ayaa isaga oo isku dayaya in uu dhexdhexaadiyo doodda culimada diidan in dumarka madax laga dhigto iyo kuwa ku dhegan in ay xaq u leeyihiin xilsaarashada madaxtinimo, ayaa cudurdaar iyo caddayn caqliga fayow qancin karta keenay oo yiri; “ Marnaba kuma jirto Nusuusta Islaamka wax caddaynaya in aysan dumarku xaq u lahayn in mas’uuliyad loo dhiibto – siiba in ay noqoto ku xigeen, iyo in ay qabato jagooyinka Qaallinimada, sharci dejinta ama sharci fasiridda, kormeerka, hawlfulinta iwm”. Sidaa darteed tani ma noqon karto qodob doodeed waqti badan lagu lumiyo waayo maahan mid shaki abuuri karta hadaan la is moodsiinaynin.
Laakiin marka aan arinka dhanka kale ka eegno waxaan badanaaba helaynaa wax kala xijaabaya fulinta mabaadi’dan Islaamiga ah iyo dhabta jirta ee dhaqan ahaaneed. Markaa uguma aannu diidin mas’uuliyadda in aysan xaq u lahayn ama u qalmin awgeed, ee waxa aan ugu diidnay maslaxo guud ee shacabka, waayo waxaan arkaynaa in aysan xamili karin, balse aysanba u soo jeedin. Waxaan doonaynaa in aan dhawrno maslaxada qoyska, maslaxada dumarka, taranka dadka, sharafta dumarka, dhaqanka qoomka, iyo guud ahaanba fulinta waxa soconaya ee qalbiga aadanuhu uu ku xasilayo.4
Haddaan dhab ugu kuur galno xadiiska Nebiga NNKHA ee uu yiri: “Dadku waxa ay u siman yihiin sida ay ilakaha shanladu u siman yihiin”.
Waxaan arkaynaa in aysan meeshaba oollin wax la yiraahdo kala saar jinsiyeed. Ma ahayn tu hadalka lagu darsado in ay qolo ku andacooto kala sarayn Bani-aadam oo ku dhisan abuur Eebbe ee kala nooc duw ah. Aayadda Qura’anka ah ee na tusinaysa tafsiirka sii dheeriga ah waxa ay tahay hadalka Alle weyne ee ah: " Dadow waxa aan idinka abuuray Lab iyo Dhedig, waxaana idinka yeelay Shucuub iyo Qabiilooyin si aad isu aqoonsataan, Ruuxase ugu sharaf badan Eebbe xaggiisa waa ka idiinkugu dhawrsasho badan, Eebana wax walba waa ogyahay"5
Waxaa laga yaabaa in uu qof Aayadaan u daliilsado in aysan qabiiladu kala saraynin oo ay dadka Ilaahay qabiil kaste ha ahaadeene siman yihiin marka laga reebo qof walba inta ay cibadadiisu tahay. Laakiin uu isla markiiba ku doodo rag iyo dumar ma sina oo way kala sareeyaan. Hadaba ila fiiriya ruuxa noocaas ah sideebuu wax u fahmaa, sow tan aayadu markii ugu horaysayba ka bilowday” “in ay rag iyo dumar siman yihiin” oo inkastoo uu Allahu ka dhigay dadka lab iyo dhedig aysan hadana kala saraynin. Saddex qodob ayey aayadu xooga saartay oo ay ka digtay in la isku kala saraysiiyo: jinsi takoor, shacab takoor iyo qabiil takoor, waxaana ugu horeeya iskala takoorka ku dhisan jinsiga –lab iyo dhedig.
MIYEY QAALLIYAD NOQON KARTAA?
Tan iyo intii uu maamulka Islaamku jiray, wax aan sidaa uga sii badnayn Qarni ka hor, waxa uu ahaa Qaalligu madaxa ugu sareeya ee Muslimiinta. Uma kala qaybsanayn dawladdu niman sharci yaqaano uun iska ah iyo niman wax maamula ee waxaa, hadayba ka duwan yihiin iyaga, daadihin jiray dawladda nimanka sharci yaqaanada ah. Madaxa dalku iyaga ayuu kaga tala iyo tusaale qaadan jiray guud ahaanba hawlaha uu damacsan yahay in uu fuliyo. Sidaa darteed waxaa lama dhaafaan ahayd in qofka Qaalliga noqonayaa uu ahaado mid aad looga taxadaray oo si daqiiq ah loo soo xulay. Maxaa wacay, Qaalliga waxa uu ku fadhiyey xilka ugu sareeya ee maamulka, maaraynta, go’aaminta iyo guud ahaanba hagidda dalka.
Imaam Shaafici, Imaam Maaliki, iyo Imaam Axmed ayaa intuba waxa ay isku raacsan yihiin in aysan qof haweeney ihi marnaba u dhawaan karin in ay gar goyso. Taas oo ah in ay noqoto Qaalliga wadanka ee dadka kala xukuma. Waxa ay culimadaasi cillad uga dhigeen go’aankooda in ay leeyihiin dumarku way ka gaabiyaan mana fara gashadaan in ay dad kala xukumaan. Teeda kale maadaama aysan wadanka xukumi karin oo loo diiday in ay noqonto madaxa ugu sareeya ee dalka, in ay wax kala xukuntaa meesha ma taallo.
Hase ahaatee, Imaam Abuu Xaniifa, oo isagu ahaa kii ugu horeeyey ee uu ka aasaasmay ama albaabada u furay iskuulkii ugu horeeyey ee lagu barto ama lagu sameeyo cilmi baarista Sharciga Islaamka, halkaasna ka asaasay Mad-habka ugu guunsan guud ahaanba dhawrka Mad-hab ee caanka ah, wuu ka soo horjeedaa go’aankaas.
Imaam Abu Xaniifa waxaa dhab ahaantii la oran karaa in uu yahay macallinka ay wax ka barten kulli madaahibaha kale. Qaar uu si toos ah wax u baray iyo qaar uu si dadban wax u baray ayeyna kala yihiin. Waxa uu Imaam abu Xaniifa araintaan ka qabaa in ay dumarku noqon karaan Qaalli buuxa, ha ahaato jegada ugu saraysa maxkamadda ama tan ugu hoosayse, dacwo kaste oo ay ka maragfuri karto. Waana tii aan mar hore soo sheegnay in Imaam Abu Xaniifa uu ogol yahay in dumarku ay ka marag kici karaan dacwo kaste oo aan ka ahayn Xuduudaha todobada ah iyo dhaawacyada6. Waxaan arintaan si hufan ugu bayaaninay kitaabka “Maragfurka Dumar oo loo eegayo Shariicad”.
Hase ahaatee waxaa isna kaga sii hormaray soo saaridda xuquuqda dumarka Imaamka la yiraahdo Ibnu Jariir Al-Dabari; Sheekh Dabari waxa uu qabaa in ay dumarku ku noqon karaan Qaalli buuxa oo aan meel kale loogu noqonaynin goynta xukun dacwo kaste iyo arin kaste oo timaadda, wixii ay doonto ha qusayse. Sidaasna waxaa ku raacay Imaam Maawardi oo isaga ka soo war qaadanaya7 Waxa uuna leeyahay ma jirto inaba haba yaraatee wax rag iyo dumar loogu kala duwo hawshatan. Sheekhu waxa uu ka qiyaas qaadanayaa ogolaanshaha la ogol yahay in ay dumarku bixin karaan Jawaab diini ah (ha ahaato xukun ama wax kale) – Fatwa, ha ku saabsanaato wixii la doone8.
Haatan si aan ula qabsano doodda culus ee dhex socota kooxda culimada ah ee aan kor ku soo xusnay, isla markaasna aan ugarabsiino tan ugu dhaw xaqqa, waxaa nala gudboon in aan kolka hore is weydiinaa, maxay yihiin shuruudaha looga baahan yahay in uu soo buuxiyo qofka loo dooranayo in uu noqdo Qaalli. Waxa aan ka xusaynaa middaan qodobada madaxa hore uga jira ee ah kuwa la isku wada raacsiisan yahay oo ah;
In uu yahay Muslim
In uu yahay caaqil – caqli leeyahy
In uu qaan gaar yahay.
In uu xor yahay.
Intaas oo qodob markii lagu heshiiyey ayaa shardi shanaad oo soo ban baxay la isku mari waayey sharciyeyntiisa. Shardigaasi waxa weeye; “In uu lab yahay” . Doodii aan kor ku soo xusnayna waxa ay salka ku haysaa ku kala duwanaanta lagu kala duwanaaday jawaabta shardigaas ugu dambeeya. Waxaanan soo sheegnay in loogu qaybsan yahay mas’alada ah in dumarku ay qaalliga maxkamadda Islaamka noqon karaan ilaa saddex kooxood oo kala ah; Diidmo buuxda, ogolaansho aan furnayn ee mararka qaarkood laga reebayo, iyo ogolaansho furan oo buuxda.
Kitaabka la yiraahdo Al-bada’ic, Juskiisa todobaad, bogga saddexaad, waxa uu qorayaa; “ Laakiin marnaba labnimadu shardi uma ahan doorashada Qaalliga, ee waa si guud (rag iyo dumarba), waayo haweeneydu waxa ay si buuxda oo aan kala qaad lahayn uga marag kici kartaa dacwo kaste marka laga reebo Xuduudaha iyo Qisaasta”9.
Haddaan u soo guda galno maxaa is af garan waaga keenay; waxaa noqotay dhibic doodeed la isku raaci waayey fasirka dhab ahaan loo siinayo kelmadda Qadaa, ee lagu noqonayey Qaalliga; Culimada qaarkood ayaa kelmada Qadaa mancno ahaan u fahamsan in muraadka loola jeedaa uu yahay; Weli ka dhigasho iyo ku dayasho –Al-tawliya wa Al-taqliid. Laakiin koox kale oo culima ihi waxa ay macnaha “Qadaa” u fahamsan yihiin in u jeedo; Xukun. Haddii Xukunkeedu (marka dhankooda laga eego) uu yahay mid banaan oo la fulinayo, ka weli dhigashadeeduna way banaan tahay.
Haddaba banaynta xukunka iyo fulintiisuba waa farac ka mid ah banaynta welinimada iyo sax noqoshadeeda. Sidaas darteed, in la baneeyo xukunkeeda iyo fulinteeda waxaa ka askumaya in la baneeyo ka weli yeelashadeeda iyo ku dayashadeeda.10
Waxaa kale oo la arkaa in ay wadaadada qaarkood ku doodaan in aysan haweeney xaakim noqon karin mas’uuliyadna qaadi karin, waayo haday taas awood u leedahay waxa ay awoodi lahayd in ay nafteeda is bixiso marka la guursanayo ama ay is mehriso marka la mehersanayo. Taas waxa aan ka leenahay sidatan soo socota:
Sida mararka qaarkood lagu arkay sunada iyo weliba laga dhadhansaday odhaahyada aayadaha Qura’an ah qaarkood, haweeneydu way is mehrin kartaa, cid kalena way mehrin kartaa. Qaar ka mid ah madaahibaha ama Imaamyada caanka ah sida Imaam Abu Xaniifa, Xasan bin Ziyad (sida uu Abi Yusuf ka soo weriyey) iyo kuwa kale ayaa si aan gabad ku jrin u banaynaya in ay qof dumar ihi is mehrin karto naf ahaanteeda iyo naf kaleba rag iyo dumar tay ahaataba. Culimadaani waxa ay daliil cad oo aan caad saarnayn ka haystaan kitaabka Quraanka ah, oo Ilaahaybaa aayad Quraan ah ku leh: “Hana ka xanibinina (dumarka) in ay nikaasxadaan raggooda”11.
Waxa ay culimadaasi taageero buuxda uga haystaan tafsiirka aayadaas ficilka ay Caa’isha (Hooyadii Mu’miniinta) ku kacday xilligii uu Nebiga qudhiisuba noolaa. Falkaas oo ahaa in ay gabadhii yarayd ee Xafsa ee gurigeeda ku noolayd u guurisay nin, aysanna arintani noqon mid ay tol iyo wadaado toona ka qaylinaynin. (faallada mawduucaan waxaad ugu tagi doontaa halka aan uga hadlayno sida looga jawaabayo xujooyinka ay wataan kuwa talinta iyo xukunka u diidan dumarka).
IMAAM NOQOSHADA SALAADDA IYO DUMARKA
Waxaa kale oo iyana arin laga yaabo ah in ay wadaadadaasi ku doodaan; maxay haweenku salaada Imaam uga noqn waayeen? Waxaa iska caadi noqotay in la isku waafaqo naagi ma noqon karto Imaam salaad ee mar kaste waa Ma’muum. Taasna waxa aan ka leeyahay:
Nebiga Nabadgelyo iyo Naxariisi Korkiisa ha Ahaatee - NNKHA, ayaa waxaa laga soo weriyey xadiiskan hoos ku cad: Abuud Da’ud ayaa sida uu Cabdiraxmaan bin Khalaad ba sheegay ka soo weriyey Umu Waraqah binti Cabdillahi bin al-Xaarith xadiis ah sidatan: “Rasuulka (salla lahu calayhi wasalam) ayaa (Umu Waraq) ku soo booqan jiray gurigeeda, markaasuu usameeyey Mu’adin u adima (waqtiga salaadda). Wuxuuna iyadii ku amray in ay tujiso dadkii gurigeeda ku noolaa”12.
Haddii aan wax ka iftiimino fahamka xadiiskaan waxa aan ka qaadan karnaa laba arimood oo muuqata, kalana ah:
In uu Nebigu haweeneydaas adimisteeda ka doorbiday in uu nin u adimo, ka dib markii ay koley ugu muuqatay in ay reerkaasi jamaaco oogi karaan dadkooda oo tiro ku filan ah awgeed. Haddaba sababteeda Nabigu ma caddaynin anaguna kuma dhiiranayno xikmada ka dambaysa in nin loogu yeero adimitaanka. Ma codkeeda oo gaaban ama khafiif ah awgii baa mise waanba dumar loo ogolayn in ay adimaan? Taasi waa mid aan dood laga doodo wax ku faa’iidaynaynin kuna haboon in sidaa looga haro.
In uu iyada ku amray in ay dadka gurigeeda ku nool salaada ka bixiso. Halkaana nooguma cadda noocyada iyo sida ay ahaayeen dadka reerkaasi. Sidaa darteed qofkeena ma go’aamin karo in ay kulli dadkaasi wada ahaayeen caruur, haween, rag ama isku jir intaba. Hadaba nama tusinayso tani in aysan dumarku imaam noqon karin ee waxa ay inoo bidhaaminaysaa in ay noqon karaan.
Ibnu Qudaamah ayaa isna waxa uu yiri: “xaal ahaanba dumarku raga kuma tujinayaan salaad, ha ahaato mid sunno ah ama mid faral ehe”. Markaas ayuu Abu Thawr yiri: “ Laakiin mar hadduu ninku ku daba tukado ma soo celinayo salaaddii, kaasina waa Qiyaaska hadalka Muzani, Waxaase jira qaar asxaabteena, culimadii Xambaliyada ka mid ahaa oo qaba in ay haweeney salaad Taraawiix ah tujin karto ragga oo ay Imaam ugu noqon karto13.
Doodda halkaas ka furantay awgeed ayaa qaar ka mid ah culimadii hore ku adkaysteen in dumarku ay imaam salaada ku noqon karaan. Oo ah maxaa ku hadalka arintaan keenay tiiyoo aan weliba la is hordhigaynin daliilo iyo cadaymo go’an? Mar ahdduu hadalku gaaray kuwii ku daba tukaday haween ha ku soo celiyeen salaadooda, sow halkaas kama cadda in ay jireen qolo haba yaraatee ku adkaysanaysay in ay haweenku salaada tujin karaan?.
Haadaba taasi waxa ay dhalisay dood fara badan oo u muuqata in ugu dambaystii ragaas aqbalayaasha (positivists) ahaa looga guulaystay oo la hir galiyey in aysan salaad tujin karin. Waxaa xusid mudan in markii dambe ay doodi ka sii furantay in haddii uu nin ku daba tukado naag ay salaadaasi u jirto iyo in kale. Waxaa Abuu Da’ud laga soo weriyey in uu yiri: “Ibnul Mundir iyo Shaafici ayaa yiri; haddii uu nin ku daba tukado naag wuu ku soo celinayaa salaadiisii”. Laakiin culimo kale ayaa arintaas ku mucaaraday oo ku adkaysatay in aan salaadaas lagu soo celinaynin. Waxa uu yiri Abuu Thawri: “ kuma ay soo celinayaan haday rag ku xirtaan salaadooda haweeney”.
Laakiin haddii aan inaguna maanta wax ka qiyaasanao doodaas saw kama fahmi karno in ay dhacday ugu yaraan in qaar muslimiinta ka mid ah ragoodu ay ku xiran jireen salaadda haweenka. Sidaas darteed ay doodu ahayd mid jiitamaysay ilaa lagu murmo ku celiya salaadiina iyo ha ku celinina ee mar dambe ha u noqonina, iwm.?
Hadaad leedihiin weligeed taariikhda laguma arag naag rag tujinaysa, waxaan idin leeyahay taariikhi diin inama barto ee bal aan iminka ku dayno (waa haddii la isku raaco ama loo arko in loo baahan yahaye). Haddii aad leedihiin lama arag haweeney rag tujisay waagii Nebigu noolaa, waxaan idinka leeyahay hadde raguba cidna ma tujin jirin mar haduu Nebigu goob joog yahay. Sidaas ka sokow miyaad Nebiga ka haysaan in uu yiri: “yeysan dumarku Imaam noqon ama ragga ka bixin salaad”?. Hadaad cadayn sidaas tusinayasa haysaan bal ina soo tusa. Haddii kale walaalayaal inta aad haysaan ma ahan mid aan marnaba laga hor imaan karin oo qofkii wax ka sheegaa uu diinta ka baxayo ee waa qodob ugu yaraan laga hadli karo.
Waxaa laga yaabaa in ay culimadu ku doodayaan in Abuubakar oo nin ahaa uu tujiyey Mu’miniintii salaad waqtigii uu Nebigu noolaa, sidaas darteed waxa keliya oo Imaam salaadeed iyo mid hogaamiye qaranba noqon kara nin oo keliya. Waxaa laga yaabaa in ay culimadaasi ku adkaystaan haddii ay banaan tahay in dumarku ay cid tujiyaan waagaas ayuu Nebigu naag u dhiibi lahaa salaadda.
Haddaba jawaabta gaaban ee kuwaas lagu qancin karo ayaa waxa ay tahay; haddii uu Nebigu abuubakar oo jooga inta ka gacma maroojiya imaamnimada haweeney u dhiibi lahaa, waxaa halkaas inooga caddaan lahayd in aysan banaanayn in raggu ay cid salaad ku tujiyaan, oo ay taasi u gaar tahay dumarka oo keliya. Laakiin waxa ay dhacdadaasi ina tusinaysaa in uu Abubakar taas ku mutaystay cilmigiisa, cibaaddaiisa, ugu horayntiisa (asyaano) Islaamka, kartidiisa dheeriga ahayd ee uu ugu adeegay Islaamka iyo guud ahaanba shuruudaha lagu mutaysto in cid la hogaamiyo.
Haddii aad ku doodaysaan culimada Islaamka ayaa isku raacday in aysan dumarku ragga salaad ku hogaamin, waxaan iminka soo bandhigaynaa in aysan taasi ahayn mid ay culimadii Islaamka oo dhami isku raaceen. Waxaa sugnaatay in Imaam Abu Thawri al-mazani iyo Ibnu Jariir al-Dhabari ku tageen iskuna raaceen in ay ansaxayso salaadda uu nin ku daba tukado naag14.
Midda kale waxa hadalkaasi ku xiran yahay in aysan suurtoobi karin in xaakim noqoshada ama qaallinimada aan looga qiyaas qaadan karin salaad tukashada, waayo salaaddu waa cibaado qadaaguna (Qaallinimada) waxa u ka mid yahay mucaamalaadka. Cibaado iyo mucaamalaadna la isagama kala qiyaas qaato.
Waxaa badan in ay culimada arintan diidani markaste ku doodaan qodobada ay ka midka yihiin;
Haddii haweeney ay tujinayso nin waxaa dhacaysa fidno ka imaanaysa xagga cawradeeda. Marka ay foorarsato ama sujuuddo ayuu ninka ka dambeeyaa wax uun hiyi kac ah dareemayaa. Sidaas darteed waxaa imaanaysa in salaaddii lagu tashwiishiyo waxyaalo la xiriira jinsiga. Haddaba maadaama aysan fikradani ahayn mid laga akhristay kitaabka Qura’nka ah ama sunnaha waxaan xaq u leenahay in aan ka jawaabno. Waxaanan ku yarayn karnaa jawaabteeda; saw lagama yaabo in ay iyaduba intaa in la mid ah ama ka sii daran dareento kolka ay aragto nin ku hor foorarsanaya?.
In uu codka naagtu cawro yaahy oo aysan banaanaynba in la maqlo. Haddii la leeyahay marka uu ninku maqlo cod haween ayaa dareen galayaa, saw iyaduna sidoo kale maahan insaan oo dareen kuma geli karo cod rag oo ay maqashay. Waxaan taas ku garan karnaa in maanta aan arkayno dumarka oo ka hela ama xiiseeya heesaha ay ku luuqeeyaan raggu, halka ay raguna ka jecelyihiin heesaha ay ku codeeyaan dumarku.
Run ahaantii haday jirto in ay taasi dareeno fidno dhalinayso, waa mid ku salaysan tarbiyad, iimaan, caqiido, dhaqan, iyo jilicsanaan shakhsiyeed. Haddii dadka rag iyo dumarba la siiyo tarbiyad wanaagsan oo la xiriirta jinsiga iyo guud ahaanba sidii ay isugu nidaamsan lahaayeen hab dhaqameedkooda nololeed iyo cibaadadooda, waxaa dhici lahayd in aysan arintu gaarin heerka tuhun ee ay maanta joogto. Waxaa hubaal ah in ay tani xiriir la leedahay dhaqamo jaahileedyada mar kaste lagu garab wado tacaaliimta Islaamka oo ay ugu horayso guur xanibiddda iyo ku mashquulidda jinsiga.
Waxaa kale oo dooda culimada maanta ku doodaysa in aysan dumarku salaad hogaamin karin laga yaabaa in ay taag darrasiiso, jiritaanka ay jirto in qaar culimada kuwii hore iyo kuwii dambe ee weligoodba reero diidmo ahaa ku sii doodeen in aysan dumarku cidna salaad ka bixin karin. Haday tahay rag, dumar, caruur, iyo labeeb toona. Qurdubi ayaa waxa uu yiri: “ Waxaan leeyahay, culimadeeniina tiri: “ ma ansaxmayso in ay haweeney tujiso salaad nin iyo naag toona”15.
Hadaba mar hadday dhacday in iyada oo la arkayo in Nabigu uu haweeney u magaacbay jagada Imaamnimada salaadda, ay hadana dhacayso in loo sii quudhi waayo xataa in ay salaad ku hogaamiso caruurta yar yar iyo dumarka, waxaa qofkeen halkaas ka dhadhansan karaa in ay jirtay waxun dumar yaraysi ah. Ha ku salaysnaato dhaqan jaahili hore ama mid dambe e waxa muuqata in ay si caadi ah dadka afka uga saarnayd in aysan dumarku waxba noqon karin aslanba.
Dhiraan dhirintaas dabadeed, waxa uu mid oran karaa; “Ogaada wadaadow ma aad haysaan wax daliil go’an ama culus ah oo aan la dhaafi karinin, faraysana in dumarka laga reebo imaam noqoshada salaadda, sidaas darteed hadana laga sii mamnuuco in ay wax xukun ah u qabato qaran Islaami ah”.
Hase ahaatee anigu waxa aan taas uga gaabsan lahaa in aan la isku wareerin maadaama aysan haatan wax weyn soo kordhinaynin. Waxaase badan inta ay carqalado hor leh abuuri karto. Sidaas darteed in aan marnaba laga dhiganin mawduuc laga doodo ama jawaab loo raadsho.
Xagga xukun ahaanta mas’aladana waxa aan ka leeyahay kolley anigu waqtigaan xaadorka ah ma odhanayo dumarku ragga ha tujiyeen, laakiin haddaan arko cid ka dhignaysa imaam ee salaad ku xiranaysa la yaabi aan mahayo.
Ujeedada aan qoraalkaan ugu soo qaatayna waxa keliya oo ay tahay in aan caddeeyo in uusan qodobkani ahayn mid loo cuskan karo ama loogaga qiyaas qaadan karo in dumarka loo diido in ay xukun qarameed qabtaan. Sababta oo ah tiisa kabe ayaa tu kale kaaba. Haddaan oraahdaan si kale u dhahno doodani dood kale ma xoojin karto mana taageeri karto, waayo iyadiibaaba war ku jiraa.
DALIILAHA KALE EE AY KU DHEGAN YIHIIN KUWA DIIDAN IN AY DUMARKU TALIYAAN IYO JAWAABTA LA SIIYEY
Waxa ay culimo badani, siiba kuwa ku nool Bariga dhexe, siiba kuwa hadana ku nool Soomaaliya ku qanacsan yihiin in ay xaaraan cad iyo dambi aad u weyn tahay in haweeney madax laga dhigto ama laga talo qaato. Xataa waxa ay mararka qaarkood si bareero ah u diiddan yihiin in lagala tashado xataa arimaha iyada nafteeda quseeya. Marka culimadaas la weydiiyo wax caddayn ah oo ay arintaa kaga haystaan Islaamka waxa ay ku leeyihiin waxaannu haysanaa Aayado cad cad oo na faraya in dumarku ay ku xaraysnaadaan guryahooda aysana iridda ka degin marnaba (duruufo lagama maarmaan ah mooyee). Waxaa ka mid ah Aayadaha ay daliilsanayaan:
“ Kuna sugnaada guryihiinna, hana iska wareegaysanina idinka oo is faydaya (ciyaal caasi ahaan u labisan), sidii jaahiliyaddii hore oo kale. Salaadana Ooga, sakadana bixiya, Eebbe iyo Rasuulkiisana adeeca. Eebbe waxa uu doonayaa uun in uu xumaanta idinka tagsiiyo (fogeysiiyo) dambigaa Ehlu beydkow uuna idin daahiriyo"16 .
Haddaan u jawaabno wadaadadaas, waxa aan u sheegaynaa ugu horeynba in ay gartaan cidda ay Aayaddu amarku ujeedinayso;
1-. Waxaan lagu doodeyn in ay Aayaddani la hadlayso xaasaskii uu Nebigu qabay oo keli ah. Caddaynta hadalkaana waxaa ku filan kelmadaha ugu dambeeya ee aayadda ee odhanaya; Xaasaka Nebigow Ilaahay wax kale taas idinkuguma waajibin ee keliya waxa uu rabaa in uu idinka Ahlu beyd ahaan idinka dhawro wixii xumaan iyo sharaf darro ah ee wax u dhimaya sumcadda qoyska Nebiga.
Haddaan hadalka dhan kale ka eegno bal kaba dhig in ay aayaddu caam tahay oo ay guud ahaan dumarka Muslimiinta ah sidaas farayso. Ma waxaa jira wax aqbalaya in ay haweenku iska wareegaystaan suuqyada dan la'aan, iyaga oo caariiyaat ah oo uu jidhkoodu banaan yahay ama qaawan yahay?. Taasi run ahaantii waa maya. Ma waxaa jira cid ama mabda' aqbalaya in ay haweeney la qabaa u dhaqanto sidii jaahiliyaddii oo meel walba u marto is tus tus ahaan (show off)?. Taasina waa maya. Haddana ma waxaa jira caqiido Islaami ah oo ogolaanaysa in aysan dumarku salaadda oogin, sakada bixin, soominna, isla markaasna aysan guud ahaanba adeecin Ilaahay iyo Rasuulkiisa?. Dhab ahaantii tanina waa maya.
Haddaba miyaan aayadda ka fahmaynaa in ay haweenku noloshooda ku dhamaystaan qolal gasadood, sidii in ay xabsi daa'im ah ku xukuman yihiin. Yaanaan arintaas dumar keliyaba ku koobine, ma waxaa jira caqiido, caqli, dhaqan iyo wax kale ee ay umadi ku wada socoto oo waxyaalahaas aan soo taxnay ee aayaddu ka digtay u ogolaanaya in uu qofna sameeyo rag ha ahaado ama dumar ha ahaadee? Waxay ila tahay in waxaas oo dhami ay yihiin waxyaalo fawaaxish ah oo cid rag iyo dumarba in ay sameeyaan u ogoliba aysan jirin dunidatan.
2- Waxaa kale oo aan laba ku murmi karin in aysan Aayaddu faraynin amar guud oo lama dhaafaan ah (Faral ama waajib). Kaas oo ka dhigaya dambi culus hadday haweeney ka baxdo gurigeeda.
3- Waxaa la hubaa in ay Caa’isha oo ka mid ahayd, balse ugu horeysay uguna mudnayd xaasaskii Nebiga ee uu amarkani sida tooska ah u khuseeyey ay in aan tiro lahayn u baxday arimo siyaasadeed, jihaad, iwm. Waxaa la arkay in qaar culimada ka mid ihi ay ku doodayaan in Caa’isha aysan berigii ay dagaallamayeen ciidankii Cali iyo ciidankii Mucaawiye u bixinin dagaal dartiis iyo in ay ciidamo hogaamiso ee ay u baxday wada heshiisiin. Haddaba jawaabta taas ku abaarani waxa ay tahay heshiisiinta qudheedu sow siyaasad maahan?. Mar haddii ay u baxday arimo bulsho ee dagaal ku taxalluqa waxa aan garan karnaa in ay faraha la gashay siyaasad ayna weliba ka cayaartay dawr muhim ah. Taas ka sokow sow Caa’isha ciidan fara weyn oo rag ah ma hogaaminaynin, kuwaas oo kula jiray talo ahaan iyo xoog ahaanba?. Miyeysan haddaba Ca’isha rag madax u noqonin? Run ahaantiina Caa’isha waxa ay gudatay waajib saarnaa oo looga baahnaa ee ma aysan gelin qalad sida ay qaar kale buun buuniyaan.
Waxaa kale oo aan halkaan ka garan karnaa in haddii ay dumarkeenu maanta wax matarayaal yihiin oo xataa haddii talo loo dhiibo ama loo fasaxo in ay meel walba galaan oo hawl loo baahan yahay ka qabtaan aysan waxba ka soo hoynaynin, sidaas si la mid ahna ay ahaayeen dumarkii ku noolaa Jassiradda Carabta berigii Rasuulku joogay. Laakiin Caa’isha oo weliba ka mid ahayd kuwaas iyadu ay ka yara duwanayd gabdhahaas oo ay guntiga dhiisha isaga dhigtay sidii ay dawrkeeda ku haboon u cayaari lahayd. Haddaba maxaa wacay sidaas?.
Dhab ahaantii marka aan arinta il furan ku eegno waxaan garan karnaa in ay Caa’isha haysatay dhiiri gelin ka dheer tan ay haysteen dumarkii kale. Waa marka ugu horayse waxay hubtay in aysan gef ka galaynin diinteeda. Waa marka labaade waxay ahayd qof lagu soo barbaariyey xaqiiqada nolosha oo aan cagta hosteda la gelinin intay yarayd. Sidaas darteed, haddii aan maanta gabdheheena inta ay yaryihiin siino tababar isugu jira xag jidh iyo xag caqli labadaba waxa aan dhawaan isticmaali doonaa oo ka faa’iidaysan doonaa waxtarkooda aan ka helno maskaxdooda, muruqooda iyo maalkooda ay ku soo xasiliyeen maskax iyo adin labadaba.
Waxaanan ka xishoonaynin in aan tusaale ugu soo qaato xaaladda dumarka xaaladda is dullaysiga qabiileed ee ka jira Somaaliya. Taas oo aan ka leeyahay tusaalaynta soo socota; Waxaa jirta in ay dadka Soomaaliyed dadyow gooni ah, ka dib markii ay arkeen in ay kaga horeeyaan xagga ilbaxnimada iyo wax qabsiga sida ka faa’iidaysiga kheyraadka dhulka iyo farsamada ay ku harqiyeen dacaayado rakhiis ah. Sida iyaga oo u baxshay magacyada ay ka midka yihiin; Midgaan, Tumaal, Jaaji iyo kuwa kale.
Haddaba si dagaal maskexeed ah ayaa waxa muuqanaysa ilaa hada in dadkaas loogaga raayey dacaayaadkaas lagu xumaynayo si looga guulaysto tartanka adduunka. Waxaad arkaysaa iyada oo xaafadaha ay degan yihiin dadkaasi aan laga qabanaynin shaqo ka weyn tii yarayd ee markii ay bilowga ahayd inta lagu dacaayadeeyey aysan wax horumar ah ku samaynin. Waxaad arkaysaa xataa iyagii oo aan ku dadaalaynin is sharfidooda shakhsi ahaaneed iyo is nadaafintooda. Waxaad arkaysaa iyagii oo aan hawaysanaynin jagooyinka sare ee dawladeed ee cuqdado isla laabaya. Waxaad arkaysaa iyaga oo haddii uu masalan ninka cidahaas ihi guursado gabadh cidaha kale ah uusan wanaajinaynin ee ayba u ekaanayso in uu ka aargudanayo ama uu magac ka dhiganayo intaan guursaday baan hadana iska furay, iwm. Sidaas si la mid ah, hadii ay dhacdo in gabadh reerahaas ka dhalatay uu la haasaawo wiil cidaha wax caaya ah ay ku adkaanayso inantaas in ay guurkiisa aqbasho.
Waxaa iyaduna taas garab socota oo wax inoo sii bayaanin karta, fikradda ku salaysan midab takoorka oo iyaduna si weerar maskexeed ah ugu habsatay aadanaha casrigaan jira. Waxaa muuqata in ay dadka aan caddanka ahayni is aaminsiiyeen in ay dabiici ahaanba isaga liitaan oo aysan ka hadli karin halka uu qofka caddanka ihi joogo. Waxaana tusaale arintaas uga filan sida ay udhaqmaan dadka Afro-Amerikaanka ah ee ku nool dalka Maraykanka, kuwaas oo intooda badan ku mashquulsan dullinimo iyo waxyaalo hooseeya.
Taas oo ah weerar maskexeed dadkaas lala helay, waxa ay si toos ah u shabahaysa tan ay dumarku is aaminsiiyeen ee ah in ay markastaba ragga ka hooseeyaan. Waxaa xusid mudan dood culus oo maalin maalmaha ka mid ah ee sanadkii 1996 kii dhexmartay aniga, saaxiibkay Soomaali ah, saaxiibkay Hindi ah, iyo afar haween ah oo Maraykan ah, kuwaas oo jagooyin sare ka hayey safaaradda Maraykanka ee ku taal dalka Malaysiya:
Waxa aan ku eedaynay gabdhihii Maraykanka ahaa in dawladoodu aysan weli ka tanaasulin foolxumadii midab takoorka ee ay si maskexeed ah u baddeleen habsocodkeedii. Doodeenaas oo markaas xiriir la lahayd ol-olihii kicinta madawga ee uu maalmahaas ninka la yiraahdo: “Luis Farkhaan” ka waday dalka Maraykanka, waxa ugu weynaa ee ay gabdhahaasi noo xujaysanayeen waxay ahayd; in haddii arintan loo garaabo oo madawga sida ay rabaan ee ah in madaxtinimada ugu saraysa dalka iyaga la siiyo ay albaabada u furayso dhib hor leh, kaas oo ah in dumarka caddaankuna ay ku doodi doonaan maa inagana markeena lanoo dhiibo xukunka, raggii madawga ahaaba waa loo dhiibaye.
Haddaba waxaad halkaan ka garanaysaa in ay jiraan umado kale oo iyaguna sida dumarka ugu xaqiran dunidaan laakiin hubaal ahaan kulligood waxay u egyihiin kuwa iyagu is xaqiray in ka badan inta la xaqiray. Tusaale, halka ay madawgu uga doodayaan maa xukunka Maraykanka naloo dhiibo, maxay u awoodi waayeen in ay ugu soo halgamaan sida ay kuwaas kaleba ugu soo halgameen?. Dumarku sidaa oo kale maxay ku waayeen in ay mar hore u soo tababartaan sidii ay dad ku xukumi lahaayeen ama wax ku ool weyn uga noqon lahaayeen dunidatan?.
Si kastaba arintu ha ahaatee maanta ma yara dhaqdhaqaaqa dumareed ee dunida ka socdaa. Waxa ay isku mar la saan qaadayaan guud ahaanba dadyowga ay kuwo kale xaqirayeen. Waxayna u egtahay in ay ugu yaraan dadyowga adduunku fahamsan yihiin in ay jiraan wax uun is xaqirid xoog ama maskax ku dhisan ihi jiraan. Sidaas darteed waxaa laga yaaba in ay ummado fara badani taas ka gilgishaan iyaga oo aan ka dhigaynin is xorayntooda mid ku dhisan buuq iyo argagixis colaadeed ee ku dhisan in ay iyaga qudhoodu isa soo dhisaan oo soo diyaar garoobaan.
5- Waxaa iska cad aysana culimo iyo caamo toona hor istaagi karin sida faafka ah ee ay dumarku ugu baxayaan danahooda gaarka ah iyo kuwa guud intaba, ayna u marayaan dhulka meel kaste oo ka mid ah. Waayo haddii la damco in la is hortaago arintaas waxa ay noqonaysaa waalli iyo axmaqnimo aan geedna loogu soo gaban, kana soo horjeedda wax kaste oo maanta jira, lana xiriira hab nololeedka danahooda si gaar ag, iyo danaha aadanaha oo idil si guud ahaaneed..
6- Hadday maanta wadaadada Muslimiintu ku sii adkaystaan sii dhiiri gelinta dayicidda awoodda Aadanaha (man-power) ee ku jirta dumarka, waxaa dhalanaya ama sii hirgalaya dulmiga, yasidda, cadaawada, xaqiiqa ka been sheegidda, xaqiridda, ka cararidda, iyo guud ahaanba xumaynta lagu hayo Islaamka iyo Muslimiinta. Eedda halkaa ka dhalataana waxa ay dusha u fuulaysaa wadaadadii dhiiri geliyey ama aan ka hortagin sii wadista caado jaahiligaas.
Haddaba haddaan la yaabayno ama aan eedaynayno markii uu Madaxweyne Maxamed Siyaad Barre u bixiyey wadaadadii ay qodobkaan isku haysteen 1970 meedyadii magaca: “Wadaad xume”, maan la yaabno kuwa sharaftii, qiimihii, qaayihii, qaranimadii, iyo qadarkii waxtar ee ay lahayd diinta Islaamku oo dhan u luminaya qodobkaa yar ee looga wada daawoobi karo si sahlan, haddii xaq doon la wada yahay.
Waxaa laga sheegay madaxweynihii ugu cimri dheeraa ee dalka Soomaaliya, Maxamada Siyad Barre, (inkasta oo aan shaki ku jirin in inta badan waxyaalaha isaga laga sheegayey ay u badnaayeen been abuur lagu allifayey kobcin siyaasdadeed oo iska dabiici ah awgeed), in uu waagiisii xukunka yiri: “ Iyada oo ay dumarku ka samirsan yihiin guud ahaanba xaqqoodii ayuu Nebi Maxamad (NNKHA) u soo baxay oo siiyey xaqoodii nuskii, ka dibna aniga ayaa maanta ugu daray nuskii ka sii dhimanaa”.
Dhihitaanka warkaasi ha ahaado been la subkay ama run la yiri ee waxa aan anigu haatan leeyahay:
“ Iyada oo aysan dumarku wax rajo ah ka qabinin in ay xaqqooda bani aadaminimo helaan ayuu Eebbe weyne Nebi Maxamad (NNKHA) u soo saaray. Markaa ayuu Nebigu shaaca ka qaaday waajibna ka dhigay in xaqooda la siiyo si buuxda. Hase ahaatee markii uu Nebigii dhintay waayo ka bacdi ayey dadkii si tartiib tartiib ah hadana u dabooleen xaqqii dumarka. Nasiib wanaagse waxaa intaa halgamayey qaar culimada diinta Islaamka ka mid ah oo ku doodayey in aan diinta lagu gefin oo dumarka xaqqooda uu Ilaah siiyey loo ogolaada. Haddaba waxa ay maanta dadku haystaan fursad ay ku ogaadaan jiritaanka xuquuqda dumarka ee la duudsiinayey ee ha ka faa’iidaysteen, haddii aanay doonaynin in ay dhex dabaashaan ceeb adduunyo iyo mid aakhiraba.
Waxaa laga yaabaa in ay wadaado badani igu diidan yihiin in Aayaddu ay ku jihaynaysay hadalka xaasaskii Nebiga si gaar ahaaneed. Haddaba waxa aan si jawaab celin ah u tusaaleynayaa isla Aayadaha kale ee ku jira isla Suuraddas, kuna wada saabsan amar jeedintaan. Tusaale; isla Aayaddaan bilowgeeda waxa uu Eebbe ku leeyahy:
"Haweenka Nebigow ma tihidin sida Haweenka kale hadaad dhawrsanaataan, hadalkana ha nugleynina oo uu damco midka qalbiga ka bukaa, kuna hadla hadal wanaagsan"17
Haddaba bilowga aayadani waxa uu ku abaaran yahay hadal u khaas ah dumarkii uu qabay Nebigu NNKHA. Mana ka muuqato odhaahda wax ka dhigaya amarka mid guud.
Haddii Eebbe uu doonayo in uu ka dhigo amarkaan mid guud waxa uu u caddayn lahaa sida uu ugu caddeeyey Aayyadda 28 aad ee isla suuraddas. Waxa uu Eebbe ku leeyahay:
" Nebiyow ku dheh haweenkaaga hadaad tihiin kuwo doonaya nolosha dhaw - adduunyo iyo quruxdeeda kaalaya waa idin gacan marin - idin sii saadin si quruxsana idiin sii dayne"18.
Innaga oo weli sii lafa gureyna daliilaha ay ku dhegan yihiin mucaaradiinta ka soo hor jeeda xuquuqda ka madax yeelashada ama baarlamaan usoo doorashada dumarka, waxa aan hadana u sii dhaadhacaynaa daliil kale oo xoog badan (xaggooda). Waxa ay tahay in ay ku marmarsiyoodaan in ay wadaan ka hortag xumaan dhacda (sadu dara’ic)
Waa run in laga hortago wax alle wixii laga cabsi qabo in ay fidno ama xumaan horseedaan ama dhaliyaan, laakiin waa in aan maskaxda laga bixin in ku maradhagnimada iyo ku xeel dheeraanshaha ka hortagga qudhiisuna uu yahay fidno kale oo loo baahan yahay in qudheeda laga hortago. Waayo ma haboona in waqti iyo tabar lagu wada lumiyo wax aan la ogeyn wax ka imaan doona, ama wax ay ka imaanayso fidno aan saa u sii halis ahayni.
Daliil kale oo ay ku dhegan yihiin mucaaradiintaasi, waxa ay tahay hadalka Eebbe ee ah;
" Raggaa u taagan (maamulka) haweenka, derajo la dheeraysiiyey awgeed (ka fadalida) Eebbe qaarkood qaar kale ka fadilay iyo ku nafaqaynta xoolohooda darteed. Haweeneyda wanaagsani way adeecdaa, ilaalisaana maqnaansho ilaalinta Eebbe darteed"19
Jawaabta qodobkanina waxa ay tahay; in ay Aayadani ujeedo labada is qabta iyo hawsha reer ee ka dhexaysa ee aysan shuqul ku lahayn arimaha siyaasadeed. Haddaba si aan taas u cadaysano waxaa haboon in aan horta ogaano sababtii keentay in ay aayadani soo degto (sababu nuzul). Sababtaasi waxay ahayd sidatan soo socota:
Waxaa laga soo weriyey Ibnu Sacad Bin Rabiic in Mid ka mid ahaa Asxaabtii Rasuulka ayaa maalin dharbaaxay xaaskiisii oo ku noqotay Naashiza – mid dhib badan oo aan waxba maqlaynin. Markaa ayey usoo dacwootay Nebiga (NNKHA). Nebiga ayaa waxa uu markaa yiri : “ Qisaas baa dhexdiina ahaatay”. Taas oo macneheedu u muuqanayo in looga qisaas qaado ninka xaaskiisii uu dharbaaxay. Laakiin wax yar ka dib ayuu Alle weyne wax walba oge soo dejiyey aayadda Qura’nka ee ah:
“Hana ku deg degin Qura’nka intuusan kuu dhamaan waxyigiisu xagaaga, waxaadna tiraahdaa Ilaahayow cilmi iisii kordhi”20. Halkaa markay xaaladdu marayso oo uu Nebigiina iska aamusay isaga oo ka baqaya in uu goynta xukunkaas ku deg degay, ayuu Eebe soo dejiyey aayadaan faraysa in ay raggu haweenkooda ka hormuud yihiin21
Waxaa kale oo si tifatiran kuugu sii cadaynaya sida uu Eebbe isaga oo hadalkaas fasiraya si aan hadhow loogu murmin ku cadeeyey isla Aayadda oo ah:
Nafaqadaas ay ragu bixinayaana waxaa ugu horeeya oo aan marnaba la dhaafi karinin Meherka la bixinayo marka la guursanayo haweeneyda iyo biilka maalinlaha ah ee lagu quudinayo nafteeda oo ay labaduba dusha ka saaran yihiin ninka wax guursaday. Hadaba badelkii xoolahaas la bixinayo ayaa waxa haweeneydana looga baahan yahay in ay la timaado adeecid iyo amaano oo aysan marnaba beegsan wax laqdabo iyo santaaglayn ah. Waxa uu Ilaahay o go’aankaas sii cadaynaya leeyhay:
“Haweeneyda wanaagsani waa tan adeecda ninkeeda ilaalisana (guud ahaanba sirihiisa iyo waxa labadooda ka dhexeeya)22
Waxaa kale oo ka mid ah waxyaalaha laga kari la’yahay wadaadada ra’yigeenan ku mucaaradka ah in ay leeyihiin Quraanka ayaa dumarka ku xukumay in ay guryahooda fadhiyaan si looga hortago fidno dhacda. Waxaana u daliil ah hadalka Eebbe ee ah;
"Kuwa la yimaada xumaan (zino) oo haweenkiina ka mid ah, marag uga dhiga Afar idinka mid ah. hadday ku marag kacaan ku haya guryaha inta uu wedku uga imanayo ama uu Eebbe ubixinayo jid kale"23
Waxaanan kuwaas ugu jawaabaynaa sida soo socota:
Waa wax aad looga murgo in ay dad sheeganaya difaaca iyo u gargaaridda diinta Islaamka ay u fasirtaan Qura’anka si ka foolxun sida ay u fasiri lahaayeen kuwa ku cadawga ihi. Waa yaabe wadaadka taas oo kale ku dhiiranayaa miyuusan marnaba u fiirsan macnaha Aayadda uu xujaysanayo?. Aayadani (in kastoo aayadda la nasakhay oo aysanba haatan shaqaynaynin xukun ahaan24) waxa ay xukun ku qaadaysay markii ay soo degtay, haddii ay haweeney la qabo ku cadaato dacwad ku lid ah iyada nafteeda oo ah in lagu qabtay iyada oo sinaysanaysa. Taas oo la leeyahay “ dee naagtii iyada oo la qabo hadana looga maara waayey dhillaysi waa in guriga lagu hayaa tan iyo intay ka dhimanayso”. Waxaa iyana daliil kale oo markaste carabka mucaaradka ku taagan ah xadiiska ah:
“ Ma guulaysanayaan (liibaanayaan) qoon amarkooda u dhiibtay naag”25. Haddaan iminka wadaadada uga jawaabno xadiiskaanna waa sidatan;
Horta aan marka hore sugno xadiiska saxnimadiisa. Marka aan ka nabadgalno muran ku yimaada saxiixnimada xadiiska aan ka doodno dhawr arimood oo kale. Kuwaas oo ay ugu horeeyaan kuwa soo socda:
1- Haddaan dib ugu noqono sidii uu ku yimid dhihitaanka xadiiskani, (sababu Al-wurud) waxa aan helaynaa in ay sheekadu ku timid, Markii Nebiga loogu soo waramay in qoladii reer Furus ee uu xukumi jirey boqorkii la oran jirey Kisra uu ka dhintay, ayna badelkiisii dhaxal ahaan ugu doorteen gabadh yar oo uu dhalay. Inkastoo aysan horayba u jiri jirin in dumar xukun loo dhiibto, waxa ay gabadhani fursad ka heshay, ka dib markii uu aabeheed horay u dilay wiilkiisii dhaxli lahaa. Ka dib markii uu ku gartay in uu qaban qaabinayey inqilaab iyo dil isaga ka soo horjeeda ayuu kala hormaray dilkii. Waxaana berigaa taagnaa colaad kulul oo weerar iyo difaac ah, oo dhex maraysayna Asxaabtii Nebiga iyo qoladaas uu taliyihii ka dhintay. Markii uu Nebigu taas maqlay isaga oo furunta lagu sii jiro ayuu hadalkaan yiri. Haddaba miyuusan macnaha xadiisku ahayn mid ku khaas ahaa dhacdadaas oo keli ah, oo uusan ujeedka Nebigu ahayn in uu leeyahay sidatan: “ Allaylehe in aysan qolada gabadha yar maanta talada ka sugeysaa anaga naga guulaysanaynin”.
Inkastoo ay jirto qaacidada ah “Cibradu waa guud ahaanba odhaahda-lafdiga, ee kuma khaas ahan sababta”, hadana waa lagama maarmaan in si aad iyo asal ah loo tixgeliyo waxay sheekadu ku timid. Waxa kale oo habioon in la dhuuxo macnaha kelamada xadiiska u asalka ah ee “guulaysi ama liibaanid”. Saw uma ekaanayso in uu Nebigu ka wado “qoladani dagaalka nooga guulaysan mahayaan”. Amase in uu dareensan yahay in ilmahaas saqiirka ihi aysan liibaan iyo barwaaqo gaarsiin karin dawlad weyn oo run ahaantii utaagnayd markaas quwadda aduunka ugu saraysa, sida halak ay maanta joogto dawladda Maraykanku.
Haddaan taas ka soo harno waxa aan arkaynaa in hadalka xadiisku uu ku egyahay uun madaxnimada ugu saraysa ee qoonka ee uusan marnaba ku lug lahayn maamulka kale sida; Madaxweyne ku xigeen, Wasiirnimo, golaha baarlamaanka, iwm. Hadaba yaa yiri dumarku xaakin ama qaalli ma noqon karaan?.
Hadday wadaadadu ina leeyihiin taariikh ahaanba uma aysan dhicin inlagu aflaxo talin iyo tusaaleyn dumar, waxaan ugu jawaabaynaa; muxuu Qura’nku inooga sheekaynayaa qisadii boqoraddii Balkhiisa ee ka talinaysay carriga Saba’ (meel hadda ka mid ah Yeman). Waxaan arkaynaa sida sharafta sare leh ee ay haweeneydaasi uga garaad saraysay raggii ku jiray baarlamaankeedii. Tusaale markii uu Nebi suleymaan u soo diray warqadda uu ugu baaqayey in ay isaga isu soo dhiibaan iyaga oo Muslimiin ah, waxa ay markiiba isugu soo yeertay golihii la tashiga ama baarlamaanka ee la shaqaynayey. Waxay weydiisay bal hadday wax talo ah hayaan iyada oo ku tidhi;
" قالت ياءيها الملأ أفتوني في أمري ماكنت قاطعة أمرا حتي تشهدون"
"Waxayna tiri Madaxeey igala taliya amarkeygan, ma aan ihi mid talo iska goosata idinka oo jooga (la tashi la'aan)”26.
Guurtidii ama Odayaashii baarlamaanku waxa ay isku raaceen qaraarkoodii ahaa;
“"" Waxay dheheen annagu waxaanu nahay kuwo xoog badan oo geesinimo badan, amarkase adaa leh ee fiirso wixii aad na farayso"27.
Laakiin boqoraddii Balkhiisa waxaa la xumaaday ra’yigii ay odayaashu gaareen ee ahaa aan dagaal galno. Waxay ogeyd in aan dagaal wiil ku dhalan ee uu wiil ku dhinto. Sidaa oo kale aan shilin ka soo galeyn dalka ee naf iyo maalba ku lumayaan. Haddaba waxa ay hadana odayaashii ugu war celisay, iyada oo doonaysay in ay ku qanciso fahamsiinta dhibka dagaalka: "
" Waxay tiri Xaakimyadu hadday magaalo ku galaan (xoog) way fasahaadiyaan, waxayna ka yeelaan Ehelkeeda sharafta leh kuwa dullaysan, sidaa ayunbayna falin"28.
Waxaa intaa ka sii daran sidii ay haweeneydaasi ula macaamiltantay Nebi Muuse oo ahayd in ay ku dayday in uu la samaysto xiriir wax wada qabsi, dhaqaale samayn, hadiyado is dhaafsi ama laaluush intaba. Markii ay kuwaas oo dhan ka caal weydey waxa ay hadana ula sii macaamiltantay hab kale oo ah xiilad ku dhisan af macaan, edeb, xikmad, muwaafaqo iwm. Isku soo duu duub oo waxa aan wada garan karnaa in aysan ujeedada uu eebbe noogu sheegayo qisadan iyo kuwa kaleba ahayn cayaar iyo madadaalo, aysanna ahayn taariikh la iska ogaanahayo ee ay hubaal tahay xukun dhacaya oo sidaa nalookugu sheegayo, ama ugu yaraan arin ku dayasho naloo kaga rabo.
Mid kale oo ay iyana culimada dumarka talinta u diidani xujaystaan waxay tahay in ay ku doodayaan in dumarku ay caqli dhiman yihiin sababtoo ah in uu Nebigu afkiisa ka yiri: “waxaad tihiin kuwa caqli naaqus ah”. Hadii aan jawaab gaaban ka bixino arintaas (iyada oo ana meelo kalena ku faahfaahinay) waxay tahay horta macnaha caqliga uu xadiiskani tilmaamayo maahan midka ah garaadka iyo garashada ee naaqisnimo la xiriirta waajibaadka saaran dumarka iyo waxyaalaha lagu kallifay sida cibaadadeeda oo kale. Taasna waxa loola dan leeyahay in ay dumarku in badan oo ay raggu fursad u helayaan cibaadaysi ay iyagu ku mashquulsan yihiin waxyaalo kale sida marka ay caadadu ku dhacdo iwm.
Aan bal yara daymoono macnaha guud ee caqliga ee waxaan isla ognahay in luqa ahaan macnaha “caqli” uu noqonayo dabar. Dabarkaasna waxan fasirkiisa ku gaabin karnaa is xakamaynta qofku uu iska dhawro ku dhicidda dunuubta. Waxaa dhacada in qof uu mar walba iska soo daayo hadallo gef ah qofna uu aad isu dhawro.
Hadaba labadaas qof waxaa markii macnaha caqliga ee dabarka la eegayo caqli hooseeya midka aan si sugan isu xakamaynin. Laakiin hadana taasi ma cadaynayso in qofkaasi uu garasho iyo garaad liito oo laga roone yahay. Halkaas marka aan ka eegno macnaha xadiiska waxay noqonaysaa in dumarku ay ragga kaga dhawyiniin xagga hadalada meel ka dhaca ah sida; aflagaadada uu dhaliyo xanaaqu, iwm. Waayo waxaa dhacaysa in mar haday dumarku had iyo jeeraale ku kulansan yihiin guryihii oo aan rag la joogin ay isku af xumaadaan. Waxaa kale oo dhacda in dumarku aysan ragooda ula hadlin si munaasab ah ee ay ka horgeeyaan xanaaq iyo hadallo kulul iyagu siyaasada ay doonaan ha ka wateene. Dhab ahaantiise tani maahan caalamka oo idil waa dhulalka Carbeed oo ay Soomaalidu ugu horayso. Sidaas aan soo sheegnay oo dhana waxa lag qaadanaya cadaynta uu Nebigu ku cadeeyey isla xadiiska oo ah in uu yiri: “ tafurna al cashiirat”, oo la macno ah; “waxa aad ku kufrisaan tolkiinna, ama guud ahaanba dadkiina ehelka idiin ah”
Macno kale marka aan ka eegno xagga caqliga waxa ay weliba si wacan u yaqaanaan culimada cilmiga nafsaaniga ku takhasustay in caqligu uu u qaybsamo laba qaybood oo muhim ah: waa mide waa caqliga qayb loo dhasho, tan labaadna waa mid la kasbado. Waxaa jirta in Alle weyne uu marka hore caqliga aadanaha isku garaam qiyaasan siiyo, inkastoo aysan meesha ka marnayn in wax walba la iska dhaxlo oo uu waalidku qayb weyn ku leeyahay raad ku reebidda ilmihiisa.
Markaa ka dib ayaa hadaba waxaa jiraysa in la kala badsado caqligii oo qofna inta u kororsado waxbarasho iyo khibrado uu helo garaad sareeya, qofna uu meel la fariisto intii ugu horayntii Alle ku shubay. Taasina waxay ka askumaysaa hadba sida ilmaha yaraantooda loo tarbiyeeyo oo ruux walba intii lagu beeray ee loo diyaaarshay unba alaga sugaa. Halkaas marka aan ka eegnana waxa aan garan karnaa in cillada caqligu hadayba jirto aysan ahayn mid uu Ilaah gooni ahaan ugu naaqusiyey dumarka ee ay tahay wax la kasban karo ee ay dadku kala bakhayleen gabdhohooda. Sidaas darteed haddii ay haatan isku si wax u baraan uguna caqliyeeyaan ilmahooda iyaga oo aan u kala saarin wiil iyo gabadh waxa laga wada rajayn karaa caqli iyo wax tar siman.
Haddii aan hadaba tafsiirka xadiiskaan ku salayno fikradda dambe waxaan garan karnaa in ay tafsiir u noqon karto macnaha oraahda Nebiga ee ah “ miyuusan maragfurka laba idin ka mid ihi u dhigmin midka hal nin”. Taas oo ah in mar hadii aysan khibrad iyo aqoon ulahayn hawlihii ganacsiga, sida aan ku faah faahinay kitaabka “Maragfurka Dumarka oo loo eegayo Shariicada” ay ka gaabiyeen dhinacaas oo naaqusku uu yahay xaga caqliga ku dhisan khibradda shaqo oo ay ka caajiseen in ay korosadaan. Taasina waa mid ku salaysan caado ee shuqul kuma lahan abuurka Eebbe.
Haddaba aan is weydiine miyeysan caddayn hadana in uu Nebigu xadiiskaas ula dan lahaa guubaabo iyo boorrin uu dumarka ku boorrinayo in ay sida isu dhaamaan oo ay meesha ka kacaan iyaga oo ku dadaalaya sidii ay raga kula tartami lahaayeen xag aakhiro iyo xag adduunba?. Sow hadalku inama tusinayo in ay dumarku ka kacaan maahsanaanta ay kaga jiraan hawlaha dunida oo aysan iskuba shuqlinaynin. Sidoo kale in ay ka haraan sheeko xaafadeedka u keeni karta dambi iyo xasarad ka timaada is af xumaynta ay dhexdooda isu geystaan, sidaas darteed ay ku waayaan aakhiradoodii.
Bal eeg haddii inta ay shaqaysato sadaqa la baxdo waxay kororsan lahayd ajir aakhiro. Sidaas ka soo horjeedkeeda haddii ay hawl ku mashquulsan tahay fursad uma hesheen hadalada gefafka ah. Intaa in la mid ah haddii ay haweeneydu dareemi lahayd in mas’uul sare tahay kuma dhaqanteen waxyaalaha ay ka midka yihiin rag ku caasinta iyo hadal qalloocinta ka soo horjeedda wanaaga uu raggu u sameeyo, waayo waxa ay dareemi lahayd in aysan dagaal ku jirin ee ay qof la mid ah wax la wadaagayso.
Si aanaan mas’aladaan keliya ugu sii fogaanin aan ku soo gaabino waano guud oo aan u jeedin lahaa hal qabsi ay qabatimeen culimada diidan talada dumarku. Halkudhegaas oo ah: “Dumarku xukun ma qaban karaan waayo waa caqli naaqus- garaad yar yihiin ama caqliba ma lahan, waa tabar yaryihiin, waa fikir qalloocan yihiin, iwm”. Inkastoo aan aaminsanahay in culimadaasi aysan hadalkaas xumaan iyo aflagaado u lahayn, waxaan hadana dareensanahay in haddii kelmad aan munaasab ahayni ay faafto oo aan yac la iska dhihin ee ayba isticmaalaan dadkii wanaaga looga dayan lahaa ay noqonayso mid aan ceeb ahayn balse laysku amaano ama lagu faantamo.
Waxaa haboon in aan halkaan ku soo qaadano dood cilmiyeed dhex martay laba sheekh oo waa weyn oo ku saabsan mas’aladatan. Sheekha la yiraahdo Abuubakar al-Qaadi oo ahaa Maaliki, ahaana Ashcari ayaa isku dayey in uu raddiyo ( ku hadal celiyo si diidmo ah) Abi al-Farah oo ku doodayey in dumarku ay madax sare noqon karaan. Doodoodiina waxay u dhacday sidatan soo socota:
Abil-Faraj waxa uu yiri: Dumarku wax way xukumi karaan waayo ujeedada guud ee laga leeyahay xukunku waa in la dhagaysto habka loo cadaynayo dacwooyinka la soo gudbiyo, in la kala saaro labada muransan si xaq ku dhisan, iyo in la oofiyo xukunka dacwooyinka la gooyey. Intaasina waa mid si sahlan ugu suurtoobi karta dumarka sida ay ragaba uga suurtoobi karto.
Sheikh Qaadi oo hadalkaas burinaya ayaa waxa uu yiri: maya ee ujeedadu waxay tahay; “Xifdinta dalka, maaraynta hawlaha, ilaalinta taranka -awlaadda, soo aruurinta dakhliga dawladda iyo siinta ciddi ugu xaqqa leh. Taasina waa mid aan ka suurtoobi karinin dumarka.
Laakiin haddii aan u garnaqno labada sheekh, aan garteena soo yaraynee maxaa ku dhacay ee ay qof haween ihi la fulin la’dahay hawlaha aan kor ku soo xusnay, ee uu Sheekh Qaadi ku adkaysanayo in aysan haweeni ka bixi karinin?. Haddii la leeyahay hawsha ayaa xoog u baahan iyaduna way xoog yartahay, ma waxaa jira xukun dad lagu kala xukmiyo xoog ku dhisan feer iyo fara laab, oo uu xaakimku kukala saaro dadka gacantiisa oo uu adeegsado. Miyeynan cidda xukunka fulinaysaa dawlad dhisan oo nidaam leh ahayn?. Xataa haddii lagu doodo waxa loo baahan yahay xaakim xoog weyn oo murqo waa weyn waxan hubnaa in dumarka qudhooda loo tababari karo feer iyo dagaal sida ninka oo kale, oo hadba inta ay qofka tabartiisa jidh ahaaneed la egtahay waa inta uu jirdhis sameeyo.
Haddii aan taas ka soo tagno maxay tahay qaacidada ay ku dhisan yihiin ujeedooyinka iyo shuruudaha uu sheegay Sheekh Qaadi ee aan sare ku soo xusnay.
Ibnul-Carabi oo labadaas sheekh u garnaqaya, laakiin u badanaya dhanka Sheekh Qaadi ayaa inta uu Qaadi yiri ku sii darsaday: “ ma ahan in ay goobaha fadhi ka muuqato, mana ahan in ay rag ku dhex darsanto iyo xataa in ay la doodo, waayo in la arko ama lala hadlo ayaaba xaaraam ah”29.
Waxay ila tahay in hadalada sheekha dambe ay mudan yihiin inlaga daba hadlo. Waxaa is weydiin leh; daliishee ayaa inoo cadaynaysa si go’an in aysan dumarku goob fadhi ama wada hadal imaan karinin oo ka muuqan karin? Xagga isku darsanka saw tii ay Nebiga iyo Asxaabtiisu iyaga oo rag iyo dumarba isugu jira ku wada tukan jireen isku masaajidka?.
Waa la gartay xarrimidda waxa loo yaqaan “khalwa” oo ah in nin iyo naag isu geyaan ah asaan is qabin ay qol isku xirtaan labadooda keli ihi, ee maxay tahay daliisha rasmiga ah ee diidaysa in koox rag ah iyo koox dumar ihi ay isku goob istaagaan?. Bal culimadu taas haku kala cadeeyeen dhaqan ahaan iyo diin ahaan. Waxaa kale oo haboon in luuqad ahaan loo fiirsado macnaha isku dheeha (ikhtilaadh) ee ay culimadu ku afgobaadsadaan. AfCarabi ahaan (ikhtilaadh) waa marka la isku dhex daro ama la isku dheeho walxo dareere ah oo aan la kala saari karin ka dib, sida in biyo iyo caano la isku dhex daro. Haddaba rag iyo dumar banaan ama gole weyn isku mar istaagay ma waxay isugu darsameen sidii caano iyo biyo isku barxamay?.
Waxaa go’aan la baciidsado ama lala yaabo ah midka ay gaareen qaar ka mid ah culimada diiday in haweenku ay taliyaan iyaga oo qabanaya jagada wadanka ugu saraysa. Waxaa ka mid ah go’aanadaas in ay leeyihiin: “mar haday naagtu xukunka dalka ku qabsato xoog ama inqilaab awoodeed, waa in la iska daayaa oo aan lagu qabsan waana ansaxmayaa xukunkeedaasi mar hadaysan Islaamka khilaafin”30.
Waxaa kale oo ay culimadaasi aad ugu doodaan in ay leeyihiin waxaa haweeneyda la siiyaa kala badh qaybta ninka dhaxal ahaan loo siiyo. Hadaanse culimadaas uga jawaabno su’aashaas, inkastoo aanaan iminka mas’alada halkeedii joogin waxaan ku soo gaabinayaa sidatan soo socota:
Waxaan si badheedhe ah idinkugu leenahay si guud ahaan ah ragga iyo dumarku qaybinta dhaxalka way u siman yihiin, laakiin waxaa jira xisaabo is dhaafsiisan oo doqoni ma garatay ah ee ay qolaba mar wax ku badsanayso. Waxaa dhacaysa in marka dhaxalka la qaybinayo uu ku soo kala beegmayo xaalado iyo wejiyo kala duwan. Mar ayaa la arkaa in ay ninka iyo naagtuba qayb is la eg ka helaan qaybta dhaxalka. Mar kale ayaa hadana waxaa dhacaysa in loo badiyo qaybta qofka labka ah. Laakiin hadana mar kale ayey dhacdaa in qaybta loo badiyo qofka dhedig.
Aan ku horaysiiyo tan ugu dambaysay ee ugu xasaasisana, waxaa jirta in marka loo qaybinayo dhaxal Hooyo iyo Aabbe uu wiilkoodii aan caruur ka tegin uu dhintay iyo xaaskiisii: marka ay xisaabta dhaxalku sidatan tahay waxaa loo kala helayaa: xaaskii waxaa la siinayaa kala badh xoolihii, hooyadiina waxaa la siinayaa saddex dalool dalool, aabihiina intii kale.
Tusaale; nin baa uga dhintay Shs.6000 dad ka kooban; Xaaskiisii, Hooyadiis, iyo Aabihiis. Haddaba marka qaybta dhaxalka sida uu Qura’nku u caddeeyey loo raacayo ayaa waxaa ugu horaynba xaq u leh in la siiyo kala badh oo badh xoolihii xaaskii uu ka dhintay. Sidaas darteed waxa ay xaq u helaysaa Shs. 3000.
Iyada oo la raacayo hab xisaabeedka dhaxal Islaamka ayaa xoolihii waxaa lagu dhisayaa xisaab ahaan (6), oo ah “suduska” tiradaan. Marka lix meelood loo qaybiyo xisaabta oo badh la siiyo ninka xaaskiisii, waxaa saddexdii kun ee soo hartay loo qaybinayaa sidatan soo socota:
Marxuumka hooyadii waxa ay xaq u leedahay in la siiyo saddex ulood (goob) oo xoolihii ka mid ah, taas oo tiro ahaan dhamaanaysa: Shs. 2000, aabihiina waxaa ku soo aadaya xisaab dhan Shs. 1000. Halkaasna aabbe iyo hooyo waxaa xoolihii ku badsanaya hooyo oo qof dumara ah.
Mas’aladatan oo la dhaho “mas’alat al-Qaraweyn”, waxaa dhacday in qaar culimada ka mid ah ay u cuntami weyday. Sidaas darteed ay ku taliyeen hab kale loo xiiladeeyo, waayo waxa ay ka soo horjeedaan in ay haweeney hesho xisaab ka badan tii uu ninku ka helay dhaxalka ay qaybsanayeen. Waxa ay u muuqataa in ay culimadaasi ka baqeen in ay khilaafaan aayadda kale ee uu Ilaahy ku leeyahy; “labku waxa uu mutaysanayaa laba jibaar inta uu dhedigu mutaysto”. Sidaas darteed waxa ay go’aamiyeen in saddex daloolka hooyada la siinayo laga dhigo “thuluth al-baaqi fi al-sudus”, halka ay ka ahayd “thuluth al-tarikat fi al-sudus”. Hase ahaatee, waxaa la gudboonaan lahayd culimadaas in aysan maanka ka saarin habsami u socodka Shariicada Islaamka oo ku salaysan caddaalad iyo sinaan.
Faham daqiiq ah oo lagu bixiyo aayadaan waxa uu ina tusinayaa in saddex meeloodka la siinayo hooyadaan uu yahay mid ka go’aya madaxa ama raasumaalka xoolihii la dhaxlayey ee uusan ahayn mid soo haraya. Waxa uu markii ugu horaysay aayadda Ilaahay ku sheegay in mar haddii ay aabbe iyo hooyo ilmahoodii dhaxlayaan hooyada la siiyo saddex meelood, laakiin lamaba sheegin inta uu aabuhu helayo, taasina waxa ay tusinaysaa in qaybta hooyadu ay tahay mid ku imaanaysa “ahlu faral” ahaan, halka ay tan aabauhu ku imaanayso hab “casabo “ ahaan. Waxayna taasi si cad inoo tusinaysaa in ay hooyadu ugu horayntiiba xoolaha ka qaadanayso saddex meeloodkeeda, ka dibna aabuhu sugayo wixii usoo hara31. Waxaa kale oo isnaa taas sii taageeraya hadalka rasuulka NNKHA tee ee ah: “ilxiqu al-fara’id bi ahliha”
“haleelsiiya faraa’idka ciddii leh”32
Waxaa la arkaa in ay cilladdu ka timid ka dib markii ay qaacido guud ka dhigteen fikradda ah in uu ninku halka aayaddaas uga xoola badsaday naagta jinsi ahaan awgeed ee aysan wax kale jirin. Laakiin marka arinta lagu fiirsho il ballaaran oo caddaalaad dhexdhexaad ah ku shaqaynaysa, waxaa la arkayaa in aayadanina ya qusayso qolo gaar ah iyo munaasabad gar ah, middaan aan iminka sharexeeda ku jirnaana munaasabad gooni ah. Midina waa haddii ay wiil iyo gabadh wada dhashay xoolihii aabahood isla dhaxlayaan, midina waa haddii ay nin iyo xaaskiis isla dhaxlayaa xoolo uu ka dhintay wiilkii ay iska dhaleen.
Haddaba bal aan eegno habka xoolahan la dhaxlayo loo qaybinayo ee ma rag baa iminka xoolihii badsaday mise dumar. Hooyo iyo aabbe waa sinaayeen markii hore ee markaan waxaa laba jibaar badsaday hooyadii. Mas’alada habkaan dhaxal qaybin oo loo yaqaan “Mas’alat Qarawiyiin” ama “mas’alat al-Curmiyiin”, waxaa jirta in qaar culimada ka mid ihi ay ku doodeen in saddex dalool daloolka la siinayo laga siinayo hooyada inta ay xoolaha oo dhami isku jiraan oo aan weli laka qaybin. Markaas ayeyna hooyada helaysaa xisaabta aan soo sheegnay ee ka badan tan aabuhu uu helayo. Waana sidaas sida ay aayaddu bayaanisay. Laakiin culimadii ay u cuntami weyday in ay naagi nin dhaxal ka badsato waxay ku doodeen in qaybta hooyada la bixinayo ka dib marka xoolaha la qaybiyo lagana bixinayo inta soo harta. Markaas ayey xisaabta hooyadu ka yaraanaysaa tan aabahae. Waayo, waxay leeyihiin, haddii aan sida horay lagu xusay u qaybino waxaa dhacaysa in ay badelanto qaacidadii ahayd in raggu ay dumarka ka badsanayaan qaybta laga helayo xoolo la dhaxlayo.
Si aan doodda ugu sii fogaano bal aan ukala dhig dhigno masaa’il dhawr qaybood oo isugu wada jaan go’an sida soo socota:
Mar haddii aabe iyo hooyo loo qaybinayo dhaxal ay cid kale kula jirto waxa uu midkoodba helayaa lix u dhig dhig. Ilaahay baa yiri:
“Labada waalidna mid kastoo ka mid ihi waxa uu mudanayaa lix dalool dalool hadduu ka dhintay caruur”33
haddaba waxaa iga su’aal ah: war miyeysan hooyo haweeney ahayn? Ma kolkii ay hooyo wax dhashay oo la ixtiraamo noqotay bay ka dalacday heerkii haweenimo ee hooseeyey sida la ictiqaaday?
Mar haddii loo qaybinayo dhaxal caruur ama kuwa qaan gaaray ee walaalo ah oo isugu jira wiil iyo gabadh, cidda la dhaxlayaana tahay walaalkood ama walaashoo waxa uu kiiba qayb ahaan u helayaa lix u dhig dhig. Haday bataana waxay wada wadaagayaan saddex u dhig dhig. Ilaahay baa waxa uu leeyahy:
“Hadduu yahay ninku ama naagtu mid la dhaxlayo isaga/iyada oo ah waalid iyo ilmo la’aan ayna dhaxlayaan walaashiis/sheed ama walaalkiis/keed, midkiiba waxa uu mudanaya sudus – lix u dhig dhig. Haday yihiin wax ka badan intaas waxay wadaagayaan thuluth - seddex meelood meel”34.
Haddaba su’aashu waxay tahay haddii lagu doodayey waxa isku qaybta helayaa waa dadka waaweyn iwm. Miyeynan tani ahayn in ay laba walaalo ihi da’dii ay donaanba ha jireene ay qayb isla eg helayaan, tiiyoo aan loo eegaynin nooca dad ee ay yihiin.
Marka uu dhaxalku dhex yaallo dad rixim - qaraabo ah oo aan casabo ahaan wax ku qaadanaynin, tusaale ahaan: adeer, habaryar, ilamah ay kuwaasi sii dhaleen iwm. Waxaa dhaxalkaas loogu qaybinayaa si sinaan farasiman ah.
Marka dhaxal loo qaybinayo gabdh keli ah oo la dhalay iyo koox qaraabo ah waxa ay gabadhaasi helaysaa kala badh oo badh xoolihii uu waalidkeed ka dhintay, guud ahaan qaraabadeedii ay ku jireen adeeradeed, habaryareheed iwm waxaa dhex yaalla nuskii soo haray.
Hadduu qof ka dhintay gabdho walaalihiis/heed ah, waxay soo istaagayaan booskii gabdhihii uu/ay dhalay/shay. Haday mid tahayna waxay helaysaa nus haday ka badan yihiinna saddex dalool oo dalool.35
DAWRKII AY DUMARKU KA SOO CAYAAREEN SIYAASADDA ISLAAMKA
Eebbe, wax walaba oge oo arke, waxa uu si cadaan ah oo xamaasadaysan inoogu sheegay in aysan rag iyo dumar ku kala duwanayn wax qabad iyo wax ku abaal marin toona. Waakan Eebbe yiri;
"" Dodow ka cabsada Eebehiina idinka abuuray Naf keliya, kana abuuray xaggeeda lamaankeeda, dabadeedna ka sii firdhiyey xagooda rag iyo haween fara badan. Ka dhawrsada Eebihiina aad isaga wax isku weydiisataan iyo riximka. Eebena waxa uu yahay ku dusha idinka ilaalinaya"36.
Haddaba anaga oo tixraacayna Amarkaas Rabbaaniga ah ee Eebbe ina siinayo, waa in aannu ogaanaa in ku kastaba rag ahaayaa iyo dumar ahaayaaba ay mas’uuliyadi ka saaran tahay faritaanka wanaagga, horumarinta, dalka islaamka, dhaqaalaynta dadka muslimiinta ah, reebidda xumaanta, la dagaallanka cadawga, samaynta dhaqaalaha, iyo guud ahaanba ku dadaalidda in la hirgeliyo wax kaste oo wanaag iyo badhaadhe keeni kara, isla markaasna laga hortago wax kaste oo bur bur iyo balaayo keeni kara.
Nebigu NNKHA waa kan yiri;
"Kii idin ka mid ah ee arka xumaan, ha ku suuliyo - tir tiro gacantiisa, hadduusan awoodinna carrabkiisa, hadduusan awoodinna qalbigiisa, taasina waa tan Iimaanka ugu taagta liidate)37.
Waxaa iska caan ah in ay Hooyadii Mu’miniita, Caa’isha ahayd qofta ugu horeysay uguna dowr weyneyd ee taariikhda lama ilaawaanka ah ku reebtay siyaasadda Islaamka. Dhab ahaantii dumarku waxa ay kaalin lama ilaawaan ah ka soo qaateen dhismihii dawladihii Islaamka ahaa ee soo maray oo dhan. Waxa ay markaste qaban jireen (inkastoo welina la baciidsanayey maskaxdii Jaahiliyadda oo dhaqso ku go’I lahayd awgeed) hawlo aan ka dhicin kuwa ay raggu qabtaan. Waxa ay hurayeen naftooda, maalkood, maskaxdooda, iyo wax kaste oo oo ay xoog iyo xiilad awoodaan.
Ca’isha iyada oo aan marnaba ka shaki qabinin dawrkeeda siyaasi ee ka soo horjeeday inankeedi Cali Bin Abi Daalib, ayey la kacday xisbigii mucaarad ee caanka ahaa ee ka soo horjeeday dawladdii Cali. Waxa ay soo saaraysay amaro siyaasadeed kul kulul iyo bayaanno cad cad oo ku lid ahaa dawladdaas la isku khilaafsanaa sharciyeynteeda.
Aasiya (Allaha ka raalli ahaadee), waxa ay ahayd xaaskii Fircoon Lacnadu ha ku dhacdee. Hase ahaatee Aasiya kama aysan daali jirin in ay Islaamka u shaqayso, tiiyoo aysan wax Alle dartii u shaqaynayaaba carrada ka muuqanin. Waxa ay Islaamka iyo Muslimiinta ugu shaqayn jirtay si caqli iyo xiilad ah oo ku beegnayd tabarteedii iyo awoodeedii. Waxa ay ka fulin jirtay hawlaheeda gudaha guriga Fircoon iyo guud ahaanba dalka Reer Masar, iyada oo isku qarinaysa caadka.
Xataa markii Berigii dambe uu fircoon ku gartay in ay Mu’minad tahay, wuu soo qabtay oo ka codsaday bal in ay ka noqoto. Laakiin way diiday oo ka dhaaratay ilaa uu ugu dambaystii Fircoon daldalay, xataa wiilkeedii yaraa ee ay isaga u dhashayna waa uu gubay. Haddaba, Aasiya waxa ay ahayd haweeney khatar ah oo siyaasiyad Muslimada ah, taas oo ugu horayntii aasaastay xisbi siyaasadeed ee Islaami ah oo mucaarad ku ah ninkii Ilaahnimada sheegtay. Ugu dambaystiina ka tagtay raad wacan, Aakhirana wanaag dhigatay. Waa tii Alle ka bariday in uu dhibka iyo fidnada Fircoon dhan u dhaafsiiyo oo guri weyn ee wanaagsan uga dhiso Jannada;
"Waxa kale oo Eebbe tusaale uga dhigay kuwa rumeeyey haweeneydii Fircoon markii ay tiri Eebbow guri agtaada iigaga dhis Jannada dhexdeeda, igana nabad geli Fircoon iyo shuqulladiisa, igana nabad geli dadkaas daallimiinta ah"38
Rafiqa Bint Safiya , Faduma Bint Khadab, waxa ay waqtigii Nebiga shaqada dawladda Islaamka u qaabilsanayeen hawlaha wararka iyo isgaarsiinta. Waxa ay ahaayeen wasiirka Warfaafinta 39.
Khadiija, Bah weyntii Nebiga, waxa ay ahayd tii ugu horeysay ee rumaysa diinta Islaamka, tiiyoo ay khatar ahayd in qof lagu soo oogo eedayn la xiriirta in uu ka baxay dhaqan jaahiliyeedkii qabiilka ama qoyska. Marka ay sidaasi dhacday waxa ay ku dhaqaaqday Khadiija in ay maal geliso kacaanka Islaamiga ah ee uu ol-olihiisu socdo.
Sumaya, Jaariyaddii Abu Xudheyfa Bin Mugiira, waxa ay ahayd gabadh ka timid reer aad u sabool ah oo aan la qiimaynin. Hase ahaatee taasi ma aysan niyad jebin. Waxa ay ka mid noqotay todobadii qof ee ugu horeeyey ee soo gasha Islaamka. Waxaa ka sii darneyd in ay goortii la maqlay in ay Islaamtay la mariyey cadaab iyo ciqaab kulul oo ka soo gaarayey xagga odayaashii dalka haystay. Waxa ay ka fureen ninkeedii, Yaasir, waxayna ka cayriyeen shaqadeedii, waxayna ku dayeen noocyo saxariireed oo ciqaab ah.
Hase ahaatee laguma karin ciqaab aduunkaas oo dhan. Waxa ay si geesinimo leh ugu adkaysatay in ay xaq ku taagan tahay, iyaguna ay habawsan yihiin. Ugu dambaystii Sumaya waxaa helay bahalkii la oran jiray Abuu Jahal . Markaasuu inta canaan iyo xaar xaaro dhegaha u saaray, hadana kama xishoone gacanta ula tagay, oo ugu dambaystii intuu waran la booday kaga dhuftay qaybta jir dumareedka hoose ama qalabka hoose ee dumarka u gaarka ah. Halkaas ayeyna Sumaya ku shahiidday, iyada oo noqotay qoftii ugu horeysey ee u dhimata Ilaahay dartiis (Fi sabiili Laahi).
Haweenka gacanta libaax ka geystay u dagaallanka Alle dartiis iyo dhismaha umad Islaami ah ee casrigaan aan joogno na soo maray, qaarkoodna weli nool yahay waxaa ka mid ah; Saynab Al-qasali, Maryam Jamiila, iyo kuwa kale oo aanan tiro ku koobi karin. Haddanse labadaas aan xusnay tusaale ahaan war gaaban uga sheegno.
Saynab al-qasali, waa gabadh caan ah oo ka soo baxday dalka Masar, bartamihii qarnigaan 20 aad. Waxa ay ahayd Gudoomiyaha sare ee ururka Haweenka ee Akhwaanul Muslimiin. Waxayna ku guulaysatay in ay qiyaastii, ku dhawaad kala badh oo badh haweenkii reer Masar ugu yeerto in ay ku dhegenaadaan Islaamka oo ay dhab ahaan ugu dhaqmaan. Waxa ayna Saynab adeegsanaysay aqoonteeda iyo caqligeeda heerka sare ahaa.
Waxaa si walba isku dayey madaxweynihii dalka ee la oran jiray Jamaal Cabdinaasir, in uu hawsheeda ugu yaraan fadhiid ka dhigo, haddiiba uusan tir tirin. In aan tiro lahayn ayaa xabsiga lagu jidh dilyeeyey, eeyo lagu diray inta loo xidh xidhay, shil baabuur in lagu dilo la isku dayey, in lacag fara badan la siiyo oo la duufsado la isku dayey, in wasiir sare laga dhigo la isku dayey, in tol iyo qaraabo loo kaashado oo lala garamo la isku dayey. Hase ahaatee wixii oo dhan waxa ay ka istaagtay in ay ku qanacsan tahay mira dhalka hawsha ay Ilaahay dartiis u hayso.
Maryam Jamiila iyadu waxa ay tahay gabadh ka dhalatay qoys Yuhuud ah, waxayna markii hore ugu walqasheen ama u baxsadeen magaca ah; Margaret Marquise. Inkastoo ay Margaret tan iyo berigay toban jirka ahayd maqlaysay ama akhrinaysay wax ku saabsan Islaamka. Nasiib wanaag, Margaret waxa ay dhab ahaan u garawsatay xaqiiqada Islaamka 1954, ka dib markii ay dhan walba isaga badh badh dhigtay Islaamka, Kiristaanka, iyo Yuhuudaba.
Dadaalkaas dheeraadka ah ee ay xaq raadiska u gashay awgii ayey ku guulaysatay in ugu dambaystii si dhab ah u soo haleesho xaqqa. Waxa ay ku dhistay rumaysadkeedii caqli, iyada oo ku fikirtay sidii ay nafteedana u badbaadin lahayd, Islaamkana waxa ugu tari lahayd. Maadaama ay gabdh yar oo aan weli isku filnaan ahayd, waxa ay ogeyd in ay dadkeedu wax yeelayn karaan jiritaankeeda, haddii ay caddaysato Islaamka. Sidaa darteed way diyaar garawday, waxayna ugu dambaystii u carartay Bakistaan 1960, iyada oo gaartay 26 jir. Halkaa ayeyna ka bilowday caddaysadkeedii iyo u shaqayntii Islaamka. Waxa ay Maryam Jamiila qortay kutub Islaami ah oo fara badan. Waxayna noqotay Daaciyad laga yaqaan maanta guud ahaanba dunida aan ku noolnaahay.
DAWRKAY DUMARKU KU YEESHEEN JIHAADKA ISLAAMKA
Horta waa in aan kolka horeba isla fahamnaa cidda uu Alle faray Jihaadka. Waxaa la arkaa in ay culimadu isku raacaan in uu Jihaadku marka koowaad faral ku yahay ragga oo keli ah, marka labaad ee ay duruuftu xumaatana rag iyo dumarba. Taasi waxa ay tahay, haddii uu cadawgu soo galo dalka Islaamka, ama ay rag yaraani jirto iwm, ee ay markaa lama huraan noqoto in ay dumarku dagaallamaan, waxa uu jihaadku noqonayaa mid faral ku ah guud ahaanba qoladaas rag iyo dumarba. Haddii kalese waxaa hawshaas fulinteeda u xilsaaran ragga.
Laakiin su’aashu waxa ay tahay, aan is weydiino inta aanana sidaas daqiiqa ah wax u sii kala saarin; in ay qof dumar ihi dagaallanto ma xaaraan baa mise waaba loo baahan yahay. Waxa ay ila tahay in lagu wada jawaabayo in loo baahan yahay. Waayo waxa aynu ka hadlaynay waa waajib iyo faral ee arintu ma taagneyn in ay banaan tahay iyo in ay reeban tahay. Haddaba waxaa lama huraan noqonaya in kolka horeba nin iyo naagba la wada tababaro. Waayo waxa ay labaduba ku jiraan heegan. Sidaa darteed haweeneydu waa askariyad, waana taliye ciidan.
Waxaa haatan dhab ahaan u muuqanaya in marka sidaa la yeelo ee la fahmo xoogga iyo wax tarka (man power) ku jira dumarka dhab ahaan loo dabaqi karo Aayadda Qura’an ka ah ee uu Eebbe ku leeyahaay;
" ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص"
"Eebbe wuxuu jecel yahay kuwa ku dagaallama (harjada ama u dadaala si naf huridnimo ah) jidkiisa, iyaga oo saf ah oo aad moodo dhismo -sarab la isku dhejiyey (midnimadooda)40
Ilaah waxa uu dhamaanba, iyaga oo aan kala saar lahayn tusay mu’miniinta tijaaro laga faa’iidayo. Waxayna tahay hadalkiisa Sarreeye uu ku yiri;
" ياءيها الذين أمنوا هل أدلكم علي تجارة تنجيكم من عذاب أليم, تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون"
" Kuwa xaqqa rumeeyow ma idin tusiyaa ganacsi idinka koriya cadaab daran. waxaad rumaynaysaan Ilaahay iyo Rasuulkiisa, waxaadna ku dagaalamaysaan jidkiisa xaqa ah idinka oo u huraya xoolihiina iyo naftiina, saasaana idiin kheyr roon hadaad tihiin kuwa wax og"41.
Haddaan u soo dhaadhacno ama mar kale xusno gabdhaha waxtarka lama ilaawaanka ah ka geystay Jihaadyadii ama duullaanadii caanka ahaa Islaamka, waxaa ka mid ah; Umma Saalim, waxa ay Islaantay, tiiyoo aysan dad saas u sii badani xaqqa fahmin. Markaa ayey kolkiiba ninkeedii u ban dhigtay Islaamka. Wuu ka diiday, markaa ayey ka qaxday oo ku biirtay ciidanka qalabka sida ee Asxaabta oo markaas cadaysanayey gedoodkoodii ugu horeeyey ee ay kaga soo horjeedeen cibaado qalloocinta iyo Ilaahyo beenaad samaysiga. Waxa ay ka qayb gashay dhawr dagaal oo ay ka mid ahaayeen; Uxud, Xuneyn iyo kuwa kale.
Dagaallada ku caanka baxay in ay dumar fara badani ku jireen waxaa ka mid ahaa; Dagaalkii Kheybar ee lagu jebiyey gaaladii. Maalintaas intuu Nebigu dumarkaas mujaahidiinta ahaa u yeedhay intuusan dagaalkii bilaaban ayuu weydiiyey; “ Maxaa idin soo saaray”? Waxay ugu jawaabeen; “ waxaan u soo baxnay in aan kaalintanada buuxino. Waxaan waraabinaynaa ragga, waxaan ku raranahay daawooyinkii dhaawaca, waxaa noo diyaarsan heesihii guubaabada iyo kicinta ahaa, Ilaahayna waan u tala saaranaynaa hawsheena. Weyna ku dhaqaaqeen dagaalkii. Markii la guulaystay ee la furtay Kheybar waxa ay mid kaste oo ka mid ahayd dumarkii mujaahidiinta ahaa ka heshay qaniimadii- wixii laga dhacay gaaladii qayb la siman tay raggu heleen42.
Ummu Cadiya, waxa ay ka qayb gashay in ka badan Todoba dagaal oo waaweyn, iyada oo ahayd kalkaaliso sare oo xirfadley ah. Waxay karinaysay raashinka, waxay aruurinaysay alaabaha, ha ahaadeen kuwa qalabka lagu dagaallamo ama kuwa lagu adeeganayey. Waxay daawaynaysay dhaawacyada, waxay xanaanaynaysay kuwa jirada iwm. Marka ay fursad u heshana wayba dagaallamaysay oo safkeeda ayey dhinac ka raacaysay.
Waxa aan marnaba la halmaami karin kaalinta ay ka soo baxeen gabdhihii iskood si nafhuridnimo ah isugu xilsaaray in ay noqdaan ciidanka ilaalada gaarka ah ee Nebiga (poliso milataro / red bret); Nasiiba Bintu Kacab, Safiya Bintu Cabdil mudalib, iyo kuwa kale. Nebiga NNKHA oo ka sheekaynaya dagaalkii Uxud ee ay gabdhahaasi qaybta libaax ka muujiyeen, waxa uu yiri; “ Mar alle markaan bidix ama midig fiirshaba waxaan arkayey Nasiiba oo dagaallamaysa si ay ii difaacdo”. Waxaana gabadhaas maalintaas ku dhacay 13 dhaawac oo kala duwan.
Sidaa si la mid ah; Safiya, waxay maalintaas intii birta la isku lisayey aragtay nin Yuhuud ahaa oo soo gooyey seeradii ay ku jireen. Markaas ayey tustay Xisaan Ibnu Thaabit. Suu waa ka baqay, oo yiri; “Anigu kuwa kalaan ku jeedaa”. Markaasay inta soo booday gacanta ku dhigtay kal-budh weyn kuna halgaaday, oo la heshay. Bartaas ayuuna ku bakhtiyey Yuhuudkii. Maalin kalena intay waran dheer qaadatay ayey wejiyada uga garaacaysay gaaladii oo ku lahayd ma maantaad Nebigii Ilaahay soo jebiseen43.
Dumarku waxa ay xilalka kala duwan ka soo kala qabteen dawladdii Islaamka ahayd ee jirtay berigii Nebiga iyo asxaabtii iyo xataa waayadii ku dhawaa ee kuwaas ka sii dambeeyey. Way ka badan yihiin wax fara lagu tiriyo ama ay xaashiyahakani soo koobi karaan gabdhahaas mu’minaatka ihi. Sidaa si la mid ah waxa aan cidina soo xisaabin karin hawlihii wax ku oolka ahaa ee ay u soo qabteen Islaamka iyo u adeegidda ummadooda.
Waxaa tusaale ahaan in loo xuso mudan markii uu Cumar bin Khadaab haweeney u magacaabay wasiirka dhaqaalaha ee ay ka soo baxday hawsheedii iyo hawlo kale oo dheeri ah sida in ay iyadu iskeed isugu xilsaarto hawshii ciidanka asluubta. Waxa ay qaadan jirtay jaydal markaa ayey inta ciidan kaxaysato ku dhex wareegi jirtay suuqyada iyada oo doon doonaysa dadka saaqidiinta ah ee meelaha iska fadhiya shaqo la’aan. Marka ay hesho mid shaqo la’aan iska wareegaya ayey ulayn jirtay oo ku qasbi jirtay in uu shaqaysto, si uu ugu yaraan naftiisa u meeleeyo. Intaa keliya ma ahane waxa kale oo ay intaa ay suuqa dhex marayso ku dhex waday wacdi iyo waano – dacwatu shaaric44.
Waxaa xusid gooni ah mudan in ay fikraddani ilaa maanta ka maqantahay dunida oo wada noqotay maadiyiin shillin raac ah. Dadka maanta nool intooda badani waa derbi jiif iyo daroogiiste oo suuqyada way kaga badan yihiin inta wax ku kala iibsanaysa. Laakiin ciduna ma aysan garan in dadka qasab lagu shaqaalaysiiyo. Laakiin mu’minadani waxa ay garatay in ay shaqadeeda ka mid tahay in ay shacabka wada shaqaalaysiiso si ay markaa uga kaaftoomaan gacanta dawaladda, baytulmaalkuna (Office of Sociel Affairs) uu u helo dakhli ku filan.
MAXAA KEENAY KALA SAARKA IYO JINSI TAKOORKA
Waxa aan u malaynayaa in ay musiibada koowaad ka dhalatay ka fogaanshaha laga fogaanayo awaamirta cad cad ee diinta Islaamka.
Iska dhega tirid la iska dhega tirayo arimo fara badan oo waaqici ah, dadkana maalin walba horyaal.
Ka go’id la’aan caado jaahili iyo dardaaran awooweed.
Taxadar dheeraad ah oo si aan cilmiyeysneyn la isaga saaro hawlaha adduunyada. Taas oo dhalisay in ay raggu dumarka ku aamini waayeen shaqooyinka culus ama muhiimka ah.
Dadkii hore ee ka soo horjeeday horukaca dumarka iyo dhaqan badelidda oo Muslimiinta soo dhex xaluuliyey dhawr Xadiis oo been (bug) ah, ayna ku duudsiinayaan xuquuqda dumarka. Taasina waxa ay keentay in arintu si kama’ ah ku soo dhex gasho macnihii diinta iyo tafsiirkii Shareecada.
Ku dheganaan fatwooyin hore oo ku haboonaa casrigoodii, laakiin aan la qabsan karin casrigeenaan. Taas oo loo baahnaa in laga takhaluso marka ugu horeysa ee uu samanku is baddelo, nonol maalmeedkuna waddo kale beegsado. Waxayna culimadu wada ogyihiin in ay fatwadu isku badesho marba waqtiga iyo duruufaha ay ku jirto ee aysan rasmi joogto ah ahayn. Guud ahaanba culimadii hore ayaa isku raacday in ay ku badelanto fatwada ay culimadu baxshaani marba halka ay ka dhacayso, waqtiga ay dhacayso, xaalka iyo duruufaha ay ku jirto, dhaqanka iyo caadada ay dhex taal iyo maslaxada dadka ay u taal arintu.
Haddii ay Wadaadadu ku marmarsiyoonayaan in ay dumarku ku mashquulsan yihiin hawsha gurigooda iyo jidhkooda, waxaa jawaab u noqonaysa ugu horeyntiiba; bal horta ha loo dhiibo xilka oo halagu tijaabiyo bal in ay ka soo baxdo iyo in ay la kufto. Haddii ay mid ama kooxi la kufto waa iyada iyo nafteeda ee arinku ma quseeyo kuwii kale. Xataa haddii ay qolo dhan dumarkoodu ka soo wada bixi waayaan yaan hadana lagu wada qaadin xukun kulligood si nooc ahaan ah ee ugu yaraan haloo arko kuwa samankaas ama duruufahaas la qeexay ku jira. Hadalkaa isaga ah waxaa u jawaab ah in uu qofku wax ku qaato waayaha uu ku dhex nool yahay. Waa in la eegaa habka ay u dhaqmeen iyo waxa lagala kulmay maamullada dumarka ee maanta jira. Sidoo kale in taariikhda dib loo raaco oo la eego bal sidii ay u soo dhaqmeen dumarkii u soo taliyey Islaamka, ee aan qaarkood qoraalkaan ku xusnay.
Hadday tahay eeddu xubnaha jidhkeeda oo aan u nugleyn shaqooyinka noocaas sare ah, waxa ay jawaabtu ku gaabanaysaa ha loo taba baro iminkaba oo hala qabadsiiyo. Haday tahay mid jirooyin ama caadooyin dabiici ah sida; Dhiigga bil laha ah, waxa ay ila tahay in marnaba uusan kaasi ka joojin hawl ay haysay, ayna ku qaban karto hawlaha xaafiiseed ee maanta jira kulligood. Midda kale waxaaba la soo saaray dawooyin loo cuno joojinta ama khafiifinta xanuunkaas, tiiyoo uusan dhiigiina go’aynin. Arimahaas waxaa lagala xiriiri karaa culimada ku takhasustay ee loo yaqaan takhaadiirta.
Haddii la leeyahay goorma ayey caruur korinaysaa?, waxa looga jawaabayaa goorma ayey dumarka soomaaliyeed ee baadiyaha adhiga ku raacaa caruurta koriyaan?. Kuwa magaalooyinka ku nool qudhoodu goorma ayey caruur koriyaan ama shaqo guri qabtaan sow ma ahan kuwa had iyo gooraale ku mashquulsan sheekooyinka iyo dagaalka dhexdooda ah, oo marka uu ninkii ka yimaado shaqada u sii bilaaba hawsha ah in uu guda galo xallinta dagaalkii dhacay intii uu maqnaa saaka.
Waxaa dunida meel walba oo goob shaqo ama goob waxbarasho ah ka jira xerooyin lagu xanaaneeyo ilmaha yar yar ee la xambaarsan yahay. Haddaba waxa la asaasi karaa xeryahaas oo ay hooyadu saacad ama laba saac ka dibba ugu imaan karto ilmaheeda kuna nuujin karto halkaa. Gurigiina waxa ay uga soo tegi kartaa maamul iyo cunto la sii diyaariyey oo aan baahi weyn loogu sii qabin maqnaanshaheeda.
Arinta madax noqoshada waxaaba sida dabiiciga ah lagu gaaraa da’da dhawr iyo Afartan iyo wixii ka sii sareeya. Da’daasna sida badanaaba caadiga ah dumarku weyba dhalmo gooyaan oo waxa ay islaantaasi u soo jeesan kartaa maamul qarameed iyo bulsho wax u tar.
Mid iyana lagu marmarsiyoon karo waxa ay tahay in aysan shaqada haweenku faa’iido soo hoynin ee ay gebigeedba ku dhamaato khasaaro iyo dayac. Tusaale; xoogaaga yar ee ay mushaar ahaan usoo hesho waxa uu kaga baxaa ilaha soo socda: Badh la siiyo jaariyaddii guriga uga shaqaynaysey, qayb ay ku raacdo taksiga keynaya shaqada, qayb ay ku gadato labis dheeraad ah oo ay isugu qurxiso goobta shaqada, qayb ku baxda jidh dhiskeeda iyo is turukaynteeda.
Haddaan iminka taas ka jawaabno waxaa quman in aannu marka hore is weydiinaa iyadu ma waxa ay u tageysaa shaqadaan danteeda mise dan la’aanteeda. Haddii ay tahay naag u shaqa tagaysa si ay waqtiga isaga soo dhamayso ama ay asxaab u soo samaysato dee iminkaba ha isaga joogto. Haddii ay fushanaysay danteeda iyo danta reerkeeda ama danta bulshada ee guud, maxaa ku kallifaya waxaas oo dhan?. Midda laga hadli karaa waa mushaarka ay siinayso jaariyadda. Taasna waxa aan uga jawaabaynaa aan is weydiinee waa tee islaanta Soomaaliyeed ee aysan maanta gurigeeda ku noolayn inan u shaqaysa ama ha siiso mushaaro ama ha ahaato qaraabadeedee?.
Haddiise aysan iminka gurigeeda joogin waa tee midda inta uu Alle siiyo dhaqaale iyadu keligeed ku filnaanaysa hawsha gurigeeda ee aan marnaba u yeeranaynin inan u adeegta?. Haddaba si shakiga looga baxo, waxaa lama huraan ah in la garto in uusan mushaarada jariyadda la siinayaa marnaba ahayn khasaaro qoys ahaaneed iyo mid qaran ahaaneed toona. Marka shaqo la siiyo inanta dan la’aanta ahayd ee ka wel welaysay nolosheedii, mustaqbalkeedii, iyo guud ahaanba nolosha qoyskeedii, waxaa la gaarayaa faa’iidooyin ay ugu horeeyaan:
In ajir laga helo xagga Eebbe.
In la kasbado xiriir saaxiibtinimo, qaraabanimo, jacayl iyo kalsooni, taas oo ay u dhawdahay in aayatiinka dambe loo baxsado.
In la maal geliyo dalkii. Qof kaste oo wadani ah oo ka hela shaqo dalka ama dibaddiisa waxa uu wax weyn ku soo biirinayaa dhaqaalaha qaranka. Haddii uu wax gato waxaa faa’iidaya beec mushrtarkii, shaqa laawihii, dawladdii iyo guud ahaanba dadkii dalka.
Waxa ay ila tahay in shaqada keli ah ee ka dayacmaysa haddii ay dumarku shaqo tagaan aya tahay “Sheeko habreedka ama sheeko gabdheedka deriska”.